ch 11 izenzo – 2fish
ekhaya / Bible / KwiZenzo zabapostile / ch 11 izenzo
KwiZenzo zabapostile 11
11:2 ke, Uthe ke uPetros akuba ukuba banyuke baya eYerusalem, abo bolwaluko ngelithi ngakuye,
11:3 bathi, "Kutheni na ukuba ufake kumadoda angalukileyo, yaye kutheni na ukudla nabo?"
11:4 Ke kaloku uPetros waqala ukuchaza kubo, ngendlela enocwangco, bathi:
11:5 "Mna ndandisemzini oyiYopa ndithandaza, kwaye ndabona, uthabatheke kwengqondo, umbono: ethile container eyehlayo, ngathi wokuba yilinen enkulu entle ithotywa ezulwini ngamasondo zaso zone. Kwaye besondela kum.
11:6 Ebona kuyo, Ndaqiqa, ndabona izinto ezizitho zine zomhlaba, kwaye nezilo zasendle, kunye ezirhubuluzayo, kunye nezinto eziphaphazelayo zamazulu.
11:7 Emva koko ndeva ke ilizwi lisithi kum: 'Vuka, Peter. Xhela udle. '
11:8 Kodwa ndathi: 'Ungaze, inkosi! Kuba into eyinqambi, nokuba yengcolileyo, ayizanga ingene emlonyeni wam. '
11:9 Ke ilizwi waphendula okwesibini, liphuma ezulwini, ', Izinto azihlambululeyo uThixo, uze ungabizi eqhelekileyo. '
11:10 Ke kaloku oku kwenziwa kathathu. Ke ngoko yonke into wenyuselwa ezulwini kwakhona.
11:11 kwaye qaphelani, kwaoko amadoda amathathu emi kufuphi ngasendlwini ebendikuyo, esuswe eKesareya ukuba eze kum.
11:12 Emva koko ke uMoya kum, ukuba ndingade ndiye nabo, ungathandabuzi nento. Ke aba bazalwana bathandathu bahamba kunye nam. Sangena endlwini yendoda.
11:13 Kwaye wachaza kuba kananjalo ukubona kwayo isithunywa sezulu endlwini yayo, emi bathi kuye: Thuma amadoda eYopa, aye kubiza umntu ogama linguSimon, ogama limbi linguPetros.
11:14 Yena uya kuthetha kuwe amazwi, apho uya kusindiswa endlwini yakho iphela. '
11:15 Kwaye xa akuqala ukuthetha, wasuka wabawela uMoya oyiNgcwele phezu kwabo, kanye njengokuba phezu nathi, ekuqaleni.
11:16 Ndakhumbula ke amazwi eNkosi, kanye njengoko yena ngokwakhe wathi: 'John, kanjalo, wabhaptiza ngamanzi, kodwa nina niya kubhaptizwa ngoMoya oyiNgcwele. '
11:17 ngoko ke, ukuba uThixo wabanika ngokunjalo nolo lubabalo, wasiphayo nathi, abaye sakholwayo eNkosini uYesu Kristu, bendingubani na mna, ukuba ndiya kuba nako ukwenza ukunqanda uThixo?"
11:18 Ezivile ke uYesu ezi zinto, bathula. Kwaye bamzukisa uThixo, bathi: "Ngoko ke liye uThixo awunike ukuguqukela ebomini."
11:19 Kwaye abanye babo, akuba zisasazekile yi intshutshiso olwenzekileyo phantsi uStefano, ngahamba, nokuba bada beza kwelaseFenike, naseSipro, nakwa-Antiyokwe, bengalithethi bantwini bambi, akukho namnye, ngaphandle kwakumaYuda kuphela.
11:20 Kodwa ezinye zezi amadoda aseSipro naseKirene, bakuba bangena Antiyokwe, bethetha nakumaGrike, imemezela iNkosi uYesu.
11:21 Yaye isandla sikaYehova kunye nabo. Kwaye kukho inani elikhulu bakholwa baza baguquka eNkosini.
11:22 Ngoku iindaba kwafika ezindlebeni Church eYerusalem ngezi zinto, bakhupha uBharnabhas kufika kwa-Antiyokwe.
11:23 Ke kaloku, akufika apho yena walubona ubabalo lukaThixo, yena ndibavuyise. Kwaye ke wabavuselela bonke ukuba baqhubeke eNkosini ngentliziyo sibambene.
11:24 Ngokuba ebeyindoda elungileyo, yena wazaliswa nguMoya oyiNgcwele nangokholo. Yaye indimbane enkulu Kongezelelwa eNkosini.
11:25 Ke uBharnabhas, waya eTarso, ukuze kufuna uSawule. Uthe akumfumana, wamsa kwa-Antiyokwe.
11:26 Baye bona bexoxa apho kwiCawa unyaka wonke. Bafundisa ke isihlwele esikhulu kangaka, ukuba kukho kwa-Antiyokwe ukuba abafundi ayaziwa kuqala ngegama lobuKristu.
11:27 Ke kaloku, kule mihla, abaprofethi evela eYerusalem waya kwa-Antiyokwe.
11:28 Ke kaloku omnye wabo, ogama linguAgabho, nivuka, waqondisa ngaye uMoya ukuba kuza kubakho indlala enkulu kulo lonke ihlabathi, leyo engazange yenzeke phantsi uKlawudiyo.
11:29 Ngoko ke abafundi bathi, ngokoko ngamnye umntu ophethwe, into babenza ukuba kuthunyelwa abazalwana ababemi kwelamaYuda.
11:30 Kwaye ngoko ke benza, bakuthumela kumadoda amakhulu ngesandla kukaBharnabhas noSawule.
KwiZenzo zabapostile 12
12:1 Ke kaloku, ngelo xesha, ukumkani uHerode isandla sakhe, ukuze uqotywe abathile evela Church.
12:2 Ke wambulala ke uYakobi, umzalwana kaYohane, ngekrele.
12:3 Yaye akubona ukuba oko kuwakholisile amaYuda, wamisa waphuma ecaleni ukundibamba noPetros. Ke kaloku kwemihla yezonka ezingenagwele.
12:4 Ngoko ke embambile, wathi yena wamthumela entolongweni, egama welani elugcinweni kumaqela amane atshintshisanayo ngalinye linamajoni amane, engxamele ukuze ukumvelisa ebantwini emva kwepasika.
12:5 Kwaye ke uPetros bavalelwe entolongweni. Kodwa imithandazo eyenziwayo kwathandazwa, yiCawa, kuThixo ngenxa yakhe.
12:6 Ke kaloku xa uHerode wayesele ekulungele eza kumvelisa, Ngobo busuku efanayo, UPetros ngobo busuku wayelele phakathi kwamasoldati amabini, waza ekhonkxiwe ngemixokelelwane emibini. Kwaye kwakukho abalindi phambi komnyango, ilinde ejele.
12:7 kwaye qaphelani, ingelosi kaYehova yema eduze, kwakhanya nokukhanya kwelo gumbi waphuma kwelo gumbi lentolongo. Kwaye evunyelwe ecaleni uPetros, yena yavusa kuye, bathi, "Vuka, ngokukhawuleza. "Kwaye imixokelelwane yakhe yawa ezandleni zakhe.
12:8 Saphendula ke isithunywa sathi kuye: "Nxiba wena, unxibe izihlangu zakho. "Wenjenjalo ke. Wathi yena kuye, "Wrap ingubo yakho wena uze undilandele."
12:9 Uphuma, , wamlandela. Kwaye Yena akazange azi le nyaniso: ukuba le nto yenziweyo Yingelosi. Kuba wayecinga ukuba ubone umbono.
12:10 Ke edlula ngabalindi yokuqala neyesibini, bafika esangweni lentsimbi elibhekisa kuwo umzi; kwaye vuleka kubo ngokwalo. kwaye asuka, bona baqhubeka behamba esitalatweni kwicala elithile. Kwaye ngesiquphe iNgelosi wemka kuye.
12:11 ke uPetros, babuyele kuye, wathi: "Ngoku ndiyazi, ngempela, ukuba iNkosi ithume isithunywa sayo, nokuba Wandihlangula esandleni sikaHerode nakuko konke oko abantu amaYuda silindele. "
12:12 Yaye njengoko ingqalelo oku, ke bafika endlwini kaMariya, unina kaYohane, ogama limbi linguMarko, apho bekuqukene khona into eyaneleyo ithandaza.
12:13 ke, ke unkqonkqozile uPetros elucangweni lwesango, intombazana waphuma waya ukuphendula, egama linguRoda.
12:14 Xa waqonda ilizwi Peter, injabulo, akazange ukuvula isango, kodwa kunokuba, luqalisile, kuthethwa ukuba uPetros umi phambi kwesango.
12:15 Kodwa uYesu wathi kuye bona, "Wena uphambene." Kodwa waqinisekisa ukuba oku kunjalo. Ngoko bona bathi, "Yingelosi yakhe."
12:16 Ke kaloku uPetros yokuzingisa enkqonkqoza. Ke kaloku, xa yalivulayo, bambona baza bakhwankqiswa.
12:17 Kodwa Uwangawangisile ke ngesandla kubo, ukuba bathi cwaka, wabachazela indlela emkhuphe ngayo iNkosi kude entolongweni. Wathi yena, "Kukwazisa uYakobi kunye nabo bazalwana." Kwaye ephuma, wemka waya kwenye indawo.
12:18 ke, kwasemini weza, kwakungekho Yingxolo ncinane phakathi kwamasoldati, njengoko oko kwenzekileyo ngokuphathelele uPetros.
12:19 Ke kaloku uHerode, akuba bamcela yaye akazange afumane kuye, zibe abalindi bancinwa, Wayalela ukuba bakhokelelwa kude. Yaye wehla kwelakwaYuda waya eKesareya, Walala khona.
12:20 Ke Waba noburhalarhume nezo yaseTire neTsidon. Kodwa beza kuye ngamxhelo mnye, yaye, azixhokonxa uBlasto,, owayephethe igumbi lokulala ukumkani, bacela uxolo, ngokuba kwiingingqi zabo lalibonelelwa ngokutya nguye.
12:21 ke, ngomhla omiselwe, UHerode ke ambethe ingubo yobukumkani, waza wahlala esihlalweni sokugweba, waza wawisa ukuthetha kwakhe kubo.
12:22 Ngoko ke abantu bedanduluka, "Lilizwi lothixo elo, yaye asilamntu!"
12:23 yaye ngoko nangoko, isithunywa seNkosi wambetha phantsi, ngenxa yokuba unike uzuko kuThixo. Ke kaloku, sagqityelwa worms, wabhubha.
12:24 Kodwa ke ilizwi leNkosi ukwanda kunye banda.
12:25 Ke kaloku uBharnabhas noSawule, ekugqibile inkonzo, babuya eYerusalem, bephethe nabo uYohane, ogama limbi linguMarko.
KwiZenzo zabapostile 13
13:1 Ke kaloku kwakukho, e Church-Antiyokwe, abaprofeti nabafundisi, kubo apho uBharnabhas, noSimon, obizwa ngokuba Black, noLukiyo waseKirene, bazila, ngubani lo mzalwana menzi-uHerode, umphathi wesahlulo sesine selizwe, noSawule.
13:2 Ke kaloku, bakubon 'ukuba ke bayabusa eNkosini, bezila ukudla, uMoya oyiNgcwele wathi kubo: "Ndahluleleni ke uSawule noBharnabhas kum, ngokuba umsebenzi endithe ekhethiweyo kuwo. "
13:3 ke, ukutya ethandaza zemifanekiso izandla zabo phezu kwabo, babandulula.
13:4 Ke kaloku ithunyelwe nguMoya oyiNgcwele, baya kwaSeluki. Banduluka khona apho ngomkhombe, waya eSipro.
13:5 Bathe ke bakuba befikile eSalami, baye bezishumayela iLizwi likaThixo kwizindlu zesikhungu zamaYuda. Baye nabo uYohane entsimini.
13:6 Bathe ke bakuba kulo lonke siqithi, kuze ePafo, bafumana indoda ethile, bili, ungumprofeti wobuxoki, umJuda, ogama linguBhar-Jesu.
13:7 Yaye wayekunye nebamba, Sergei Paul, umntu onengqondo. lo mntu, mema uBharnabhas noSawule, wayefuna ukuva iLizwi likaThixo.
13:8 Ke uElima, usiyazi lowo (kuba litsho igama lakhe lakuthethwa ngentetho evakalayo) bema nxamnye nabo, efuna ukulijika ibamba elo elukholweni.
13:9 ke uSawule, okwabizwa ngokuba uPawulos, ekubeni kuzaliswa nguMoya oyiNgcwele, wakhangela kuye ngenyameko,
13:10 wathi yena: "Ngoko ke uzele lulo lonke uhlobo lwenkqatho nalo lonke manga, nyanandini woMtyholi, utshaba ubulungisa, wena kunqumka ukuphazamisa iindlela zobulungisa zeNkosi!
13:11 Kwaye ngoku, khangela, nangoku isandla seNkosi siphezu kwakho. Kwaye uya tameke, kube mzuzu ungaliboni ilanga ukuba ubude bexesha. "Yaye ngoko nangoko inkungu kwehla ubumnyama phezu kwakhe. Kwaye bebehamba, yena wayefuna umntu ukuba bokumrhola ngesandla.
13:12 Ke ibamba, Ke kaloku, akuwubona kwenziwa yintoni, bakholwa, ukuba lisiwe phezu imfundiso yeNkosi.
13:13 Ke kaloku uPawulos kunye nabo babekunye naye ukuba ngomkhombe ePafo, bafika ePerga yasePamfili. Ke uYohane wemka kubo waza wabuyela eYerusalem.
13:14 kodwa ngokwenene, bona, abahamba ePerga, kufika kwa-Antiyokwe kwelasePisidi. Kwaye phezu bengena endlwini yesikhungu ngomhla wesabatha, Bahlala phantsi.
13:15 ke, emva kokufunda evela umthetho nabaprofeti, iinkokeli yesikhungu bathumela kubo, bathi: "Abazalwana Noble, ukuba kukho kuwe naliphi na ilizwi lovuselelo olu abantu, thetha. "
13:16 ke uPawulos, ndivuka kwaye Uwangawangisile ke uAlesandire ngesandla sakhe, wathi: "Madoda, maSirayeli nani nimoyikayo uThixo, silalele.
13:17 UThixo abantu amaSirayeli wabanyula oobawo bethu, yaye wabaphakamisa abantu, bakuba nabafiki ezweni laseYiputa. Nangengalo esiphakamileyo, Wabanyathelisa kude apho.
13:18 Kwaye lonke ixesha leminyaka engamashumi amane, wakrota ukuziphatha kwabo entlango.
13:19 Kwaye ngokutshabalalisa iintlanga ezisixhenxe kwilizwe lakwaKanan, wababela ilizwe labo phakathi kwabo ngeqashiso,
13:20 emva amakhulu amane anamanci mahlanu iminyaka. Ke kaloku, emva kwezi zinto, wabanika abagwebi, kwada kwezisa umprofeti uSamuweli.
13:21 Yaye kamva kwi, bacela ukumkani. UThixo wabanika uSawule, unyana kaKishe, indoda yesizwe sakwaBhenjamin, iminyaka engamashumi amane.
13:22 Ke kaloku wamhlalisa, wamvusa kubo ukumkani uDavide. Nokunikela ubungqina ngaye, uthe, 'Ndifumene uDavide, unyana kaYese, ukuba indoda engantliziyo yam, ngubani na oya kukwenza konke oko ndiya kuthanda. '
13:23 Enzaleni yayo, ngokwedinga, UThixo uYesu nguMsindisi kuSirayeli.
13:24 UJohn wayeshumayela, phambi kobuso kokufika kwakhe, ubhaptizo loguquko kubo bonke abantu bakwaSirayeli.
13:25 ke, xa uYohane zigqityiwe ikhondo lakhe, wayethi: 'Andinguye lowo wena unobudlelane nam ukuba ndibe. Ngokuba, yabonani, umntu efika emva kwam, ibingabo iimbadada ezinyaweni kodwa mna andifanele athambise. '
13:26 abazalwana Noble, oonyana bomlibo wakwa-Abraham, nabo phakathi kwenu bamoyikayo uThixo,, ngayo kuwe iLizwi lolu lusindiso sele ithunyelwe.
13:27 Kuba abo awayehlala eJerusalem, nababusi balo, elilalela akukho naye, bengamazanga lowo, kwanamazwi abaprofeti aleswayo iisabatha ngeesabatha, wazalisekisa ezi ngokuthi amgweba.
13:28 Kwaye nangona bengafumananga nalinye ityala lokufa kuye, bacela kuPilato, ukuze bambulale.
13:29 Xa ke babezifezile zonke izinto ezibhaliweyo ngaye, ukuthatha naye emthini, ke wambeka engcwabeni.
13:30 kodwa ngokwenene, UThixo wamvusa kwabafileyo ngomhla wesithathu.
13:31 Yena lowo wabonwa imihla emininzi ngabo wenyuka naye, bevela kwelaseGalili besiya eYerusalem, ngubani na ke abangamangqina akhe ebantwini.
13:32 Kwaye ke sinazisa ukuba lesithembiso, esenziwa ngayo oobawo bethu,
13:33 iye lazaliseka lokuba abantwana bethu nguThixo ngokuvusa uYesu, kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa nakwiNdumiso yesibini nayo: 'Wena unguNyana wam. Namhla ndikuzele. '
13:34 ngoku, ekubeni ke nokumvusa kwakhe kwabafileyo, ukuze bangabi sabuyela ekuboleni, yena uthe le: 'Ndiya kuninika izinto ezingcwele kaDavide, lowo uthembekileyo. '
13:35 Futhi ke, kwenye indawo, uthi: 'Akuyi kumyekela oyiNgcwele wakho ukuba abone ukubola.'
13:36 Ngokuba uDavide, xa elungiselela ngezizukulwana yakhe ngokungqinelana ukuthanda kukaThixo, Ndiye ndalala, yaye yabekwa ecaleni kooyise, waza wabona ukubola.
13:37 kodwa ngokwenene, yena lowo uThixo wamvusa kwabafileyo akambonanga inkohlakalo.
13:38 ngoko ke, makwazeke oko kuni, abazalwana zobunene, ukuba ngaye kwaziswa kuni uxolelo kwizono nakuko konke nawe ngazo akanako nje ukugwetyelwa emthethweni kaMoses.
13:39 kuye, bonke abakholwayo bayagwetyelwa.
13:40 ngoko ke, lumnka, ningafikelwa koko kwathiwa yi Abaprofeti ukuze kokugubungela:
13:41 'Nina badeli! Khangela, bayazibuza, kwaye iyaphalala! Ngokuba ndiya kusebenza isenzo ngemihla yenu, a ncwadi, eningayi kukholwa nguwo, nokuba othile ukuba akuchazele yona. ' "
13:42 ke, njengoko babehamba, babacela ukuba, ngesabatha elandelayo, zimbambise ngokuthetha la mazwi kubo.
13:43 Kwaye xa yesikhungu sichithiwe, abaninzi phakathi kwamaYuda kunye abanquli ezintsha babelandela uPawulos noBharnabhas. kwaye ke, uthetha nabo, zacela ukuba baqhubeke sinobabalo lukaThixo.
13:44 kodwa ngokwenene, ngesabatha elandelayo, phantse yonke isixeko kunye ukuva iLizwi likaThixo.
13:45 Ke amaJuda, Akubona izihlwele, bazaliswa nomona, kwaye bona, uyanyelisa, bemphikisa izinto kuthethwayo nguPawulos.
13:46 Wandula uPawulos noBharnabhas wathi ngokuqinileyo: "Kwafuneka ukuthetha iLizwi likaThixo kuni kuqala. Kodwa ke ngenxa yokuba singasamkeli, ukuze nazigweba ukuba anibufanele ubomi obungunaphakade, khangela, sibheka kuzo iintlanga.
13:47 iNkosi Ngokuba usiyale: Ndikubekile ukuba ube lukhanyiselo lweentlanga, ukuze ube ngowosindiso, kude kuse ekupheleni kwehlabathi. ' "
13:48 Ke iintlanga, Bakukuva oku, zaye ndibavuyise, yaye balizukisa ilizwi leNkosi. Baye ke besindiswa abasukuba ababekholelwa preordained ubomi obungunaphakade.
13:49 Ke kaloku kwafika ilizwi leNkosi lwahlwayelwa kuwo wonke loo mmandla lonke.
13:50 Kodwa amaYuda + axhokonxa abanye abafazi ababehlonela uThixo uthembekile, kunye neenkokeli aloo mzi. Yaye avusa intshutshiso nxamnye noPawulos noBharnabhas. Kwaye wawagxotha kwiindawo zabo.
13:51 kodwa bona, ishukumisa uthuli lweenyawo zabo, wahlabela mgama eIkoniyo.
13:52 Abafundi ngokufanayo bazaliswa luvuyo kunye noMoya oyiNgcwele.
KwiZenzo zabapostile 14
14:1 Kwathi ke eIkoniyo, bangena kunye endlwini yesikhungu yamaYuda, baza bathetha ngendlela yokuba inkitha enkulu yamaYuda kwanamaGrike.
14:2 kodwa ngokwenene, amaYuda angavumiyo baye bafaka kwaye enflamed imiphefumlo yabeentlanga ngakubo abazalwana.
14:3 Kwaye, bahlala ixesha elide, wenza okuthembekileyo eNkosini, umnikelo ubungqina iLizwi lobabalo lwakhe, ngokubonelela imiqondiso nezimanga ngezandla zabo.
14:4 Ke inkoliso yomzi. kwaye ngokuqinisekileyo, inxenye amaJuda, abanye kodwa ngokwenene baba kunye nabapostile.
14:5 Ke kaloku, xa ukuhlaselwa sele izicwangciso yi ukuba abeentlanga nabangamaYuda, kunye neenkokheli zabo, ukuze kubaphatha ngendelelo ngamatye yaye,
14:6 bona, ekuphumezeni lo, babalekela ndawonye eListra naseDerbhe, emizini yelaseLikawoni, kunye lonke nakuloo mimandla. Baye ivangeli kuloo ndawo.
14:7 Ke kaloku indoda ethile yayihleli eListra, ikhubaziwe ezinyaweni zakhe, ibisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo, abangazange ihambe.
14:8 Le ndoda weva uPawulos ethetha. ke uPawulos, beqwalasele kuye ngenyameko, ebona ukuba inokholo, ukuze kungenzeka waphilisa,
14:9 wathi ngezwi elikhulu, "Yima nkqo ngeenyawo zakho!"Kwaye yena umtsi, ukuhambahamba.
14:10 Kodwa xa izihlwele ukuba bakubona oko akwenzileyo uPawulos, Baliphakamisa ilizwi labo ngolwimi ngokwesiLikawoni, bathi, "Oothixo, wathabatha imifanekiso yabantu, zivela kuthi!"
14:11 Yaye zabiza uBharnabhas, 'Jupiter,'Kodwa eneneni okwanguPawulos, 'Mercury,'Ngenxa yokuba isithethi phambili.
14:12 kwakhona, umbingeleli kaZeyus, ngubani ngaphandle komzi, phambi kwesango, ukuzisa iinkunzi zeenkomo nezidanga zeentyantyambo, wayekulungele ukunikela imibingelelo kunye nabantu.
14:13 Ke kaloku kamsinya nje bapostile, OoBharnabhas noPawulos, yakuva, nihlinza neengubo zawo, ke leapt sihlwele, ememeza
14:14 esithi: "Madoda, kutheni ufuna ukwenza lo? Nathi umntu, amadoda njengani, sinishumayeza iindaba ezilungileyo zokuba iguqulwe, kwezi zinto zililize, kuThixo ophilileyo, owenza izulu nomhlaba nolwandle, neento zonke ezikwezo zinto.
14:15 Ezizukulwaneni zangaphambili, wazivumela zonke iintlanga ukuba zihambe ngeendlela zazo.
14:16 kodwa ngokuqinisekile, engazange azishiye yena ngokwakhe ngaphandle ubungqina, ukwenza okuhle evela ezulwini, esinika imvula namaxesha aneendyebo, ezanelisa iintliziyo zabo ngokudla nangemihlali. "
14:17 Kwaye ngokuthi ezi zinto, bona babengakwazi ukwenza ukuzidambisa iindimbane ukusuka immolating kubo.
14:18 Ke kaloku kwafika amaYuda evela kwa-Antiyokwe naseIkoniyo. Ke kaloku basifunza isihlwele, amxuluba ngamatye uPawulos, amrholela ngaphandle komzi, ecinga ukuba ufile.
14:19 Kodwa njengoko abafundi babemi ngakuye, wavuka waza wangena esixekweni. Yaye ngemini elandelayo, ke banduluka noBharnabhas baya eDerbhe.
14:20 Bathe ke bakuba kushunyayelwa kuyo eso sixeko, kwaye ifundisa, babuya beza eListra naseIkoniyo nakwa-Antiyokwe,
14:21 besomeleza imiphefumlo yabafundi, kwaye ebakhuthaza ukuba bahlale kusoloko elukholweni, kwaye ukuba kuyimfuneko ukuba singene ebukumkanini bukaThixo ngokuphumela kwiimbandezelo ezininzi.
14:22 Bakuba sungula ababingeleli kubo ecaweni nganye, bethandazile kunye nokuzila ukudla, bawayaleza eNkosini, awayekholwe kuyo.
14:23 Kwaye sihamba ngendlela kwelasePisidi, befika kwelasePamfili.
14:24 Ke kaloku, belithetha ilizwi leNkosi ePerga, bangena Ataliya.
14:25 Banduluka khona, apho ngomkhombe, baya kwa-Antiyokwe, apho babenikelwe khona elubabalweni lukaThixo, ukuba baye emsebenzini, lo ke bezigqibile ngoku.
14:26 Bakuba befikile yaye belihlanganisele ndawonye ibandla, Baye nabo bezichankcisa izinto ezinkulu izinto awazenzayo uThixo enabo, nendlela yena wazivulela ucango lokholo iintlanga.
14:27 Baza bahlala kuba akukho encinci ixesha bekunye nabafundi.
KwiZenzo zabapostile 15
15:1 Kanye nabantu abathile, ehla evela kwelakwaJuda, babafundisa abazalwana, "Ukuba anithanga naluswe ngokwesiko likaMoses, aninako ukusindiswa. "
15:2 ngoko ke, kwakubon 'ukuba uPawulos noBharnabhas wenza akukho mvukelo encinane kubo, bagqiba kwelokuba uPawulos noBharnabhas, yaye abanye kwicala eliphikisayo, mabenyuke baye kubapostile kunye nababingeleli eYerusalem ngokuphathelele kulo mbuzo.
15:3 ngoko ke, ndarholwa ibandla, baya balityhutyha elaseFenike nelaseSamariya, echaza ukuguquka kwazo iintlanga. Kwaye babanga uvuyo olukhulu kubo bonke abazalwana.
15:4 Bathe bakuba befikile eYerusalem, bamkelwa libandla nangabapostile nangamadoda, becacisa oko zingako izinto awazenzayo uThixo enabo.
15:5 Kodwa abanye behlelo labaFarisi, abo amakholwa, wavuka ke uthi, "Kuyimfuneko ukuba aluke baze bayalelwe ukuba bagcine umthetho kaMoses."
15:6 Bahlanganisana ke abapostile namadoda amakhulu, ukuba anyamekele lo mbandela.
15:7 Kwaye emva kokuba sinomzamo omkhulu wayethathe indawo, Wesuka uPetros wathi kubo: "Abazalwana Noble, uyakwazi oko, kwiintsuku nje, UThixo unyule phakathi kwethu, ngomlomo wam, Abeentlanga ukuba liveni ilizwi iVangeli zikholwe.
15:8 uThixo, ngubani uyazazi iintliziyo, ubungqina ngazo, ngokuzinika uMoya oyiNgcwele kubo, kanye njengokuba nathi.
15:9 Kwaye ukuba wahlukile nto phakathi kwethu nabo, ezihlambulule iintliziyo zazo ngokholo.
15:10 ke ngoko, nimlingelani na uThixo, ukuba ukunyanzelisa idyokhwe entanyeni yabafundi, iinkumbi ezingabonwanga ngooyihlo bethu yaye siye sakwazi ukuba athwale?
15:11 Ke ngalo ubabalo lweNkosi uYesu Kristu, sikholelwa ukuze basindiswe, ngendlela efanayo njengoko kubo. "
15:12 Ke indimbane yonke wathula. Baye ukuphulaphula ooBharnabhas noPawulos, echaza oko yayingako imiqondiso emikhulu nezimanga, awazenzayo uThixo phakathi kwazo iintlanga ngabo.
15:13 Kwaye emva kokuba cwaka, UYakobi waphendula wathi: "Abazalwana Noble, Mamela kum.
15:14 USimon lo ukucacisile ukuba yintoni na ekuqaleni uThixo ukuzivelela, ukuze ukuthatha ukusuka kwabeeNtlanga abantu ukuba igama lakhe.
15:15 Yaye amazwi abaProfeti ayavumelana kule, kanye njengoko kubhaliwe:
15:16 'Emva kwezi zinto, Ndiya kubuyela, mna ndibuye ndiwakhe umnquba owileyo kaDavide, owileyo phantsi. Yaye ndiya kubuya ndiwakhe amanxuwa awo, yaye mna ndiya kuyivusa,
15:17 ukuze amaqongqolo abantu ayifune iNkosi, ndawonye zonke iintlanga phezu kwabo igama lam uye wasebenzisa, itsho iNkosi, owenza ezi zinto. '
15:18 ENkosini, Umsebenzi wakhe uye eyaziwayo phakade.
15:19 Ngenxa yale nto, Ndigweba ukuba abo baguquka uThixo phakathi kweentlanga abayi kuphazanyiswa,
15:20 kodwa kunokuba ukuba masibabhalele ukuba, ukuba kufuneka azigcine ekungcolisweni zezithixo, nakuhenyuzo, kwaye sele suffocated nangantoni, nasegazini.
15:21 Kuba uMoses, ukususela kumaxesha amandulo, ebenabo komzi ngamnye abo bamshumayelayo ezindlwini zesikhungu, apho yokuba ufundwa ezi iisabatha ngeesabatha. "
15:22 Kwaza kwabonakala kulungile kubapostile nakumadoda amakhulu, lonke iBandla, ukuba banyule amadoda kwakubo, nokuba bawathume kwa-Antiyokwe, kunye noPawulos noBharnabhas, uJudas, ogama limbi nguBharsabha, no Silas, amadoda avelele phakathi kwabazalwana,
15:23 oko kwabhalwa ngezandla zabo: "Abapostile nabadala, bazalwane, abo e-Antiyokwe yaseSiriya naseKiliki, abazalwana abavela kwiintlanga, ukubingelela.
15:24 Ekubeni sivile ukuba abathile, uphuma phakathi kwethu, ukuba inkathazo ngeentetho, bezama ukubhukuqa imiphefumlo yenu, Esathi abo asabavumela ngolulamo umthetho,
15:25 kwakholeka kuthi, kokuba ibandla elinye, ukuba sinyule amadoda ukuba siwathume kuni,, ne uBharnabhas wethu othandekayo, uBharnabhas noPawulos:
15:26 amadoda endabanikelayo ubomi babo ngenxa yegama leNkosi yethu uYesu Kristu.
15:27 ngoko ke, siye ooYuda noSilas, abothi nabo, kunye ilizwi elithethwe, luzimisele kuwe izinto ezifanayo.
15:28 Kuba kwabonakala kulungile kuye uMoya oyiNgcwele, nakuthi, ukuba ukunyanzelisa mthwalo olunye phezu kwakho, ngaphandle kwezi zinto ziyimfuneko:
15:29 zokuba nizile izinto immolated kwizithixo, nasegazini, yaye oko kuye suffocated, nakuhenyuzo. Uya kuba kuhle ukuba sihlale kwezi zinto. Ndlela-ntle. "
15:30 Kwaye, ekubeni kuthathwe, behla baya kwa-Antiyokwe. Uze uhlanganise ndawonye inkitha, baza bayinika incwadi.
15:31 Ke bakuba ukuyifunda, ke ndibavuyise yi le intuthuzelo.
15:32 Kodwa uYudas noSilas, ekubeni bengabaprofeti nabo ngokwabo, ngcono abazalwana amazwi amaninzi, yaye saqiniswa.
15:33 ke, emva kokuchitha ixesha elithile khona, banduluka ngoxolo, abazalwa-, kwabo babebathumile.
15:34 Kodwa kuSilas kwabonakala kulungile ukuba akhe ahlale khona. Ngoko uYuda kuphela waya eYerusalem.
15:35 Balibala ke ooPawulos noBharnabhas kwa-Antiyokwe, nabanye abaninzi, ukufundisa nokushumayela iLizwi leNkosi.
15:36 ke, emva kweentsuku ezithile, Wathi uPawulos kuBharnabhas, "Makhe sibuye ukutyelela abazalwana kuzo zonke izixeko esalazisayo kuyo ilizwi leNkosi, ukuze sibone ukuba banjani na. "
15:37 Ke kaloku uBharnabhas wangxamela ukuba bathabathe uYohane, ogama limbi linguMarko, kunye nabo.
15:38 Kodwa uPawulos esithi ufanele ukuba samkelwe, ekubeni wemka kubo kwelasePamfili, yaye bengayanga nabo emsebenzini.
15:39 Kwaye kwabakho impambano, ku kangangokuba omnye komnye banduluka. ke kaloku uBharnabhas, eneneni Mark, owawuya Cyprus.
15:40 kodwa ngokwenene, Paul, ngokukhetha Silas, isetwe yonke, ekhutshwe abazalwana kubabalo lukaThixo.
15:41 Waza wahambela iSiriya neKilikiya, eqinisekisa Amasonto, ebayalela ukuba bagcine Izimiselo kubapostile namadoda amakhulu.
KwiZenzo zabapostile 16
16:1 Ngoko wafika eDerbhe naseListra. kwaye qaphelani, umfundi othile ogama uTimoti khona, unyana womfazi ongumYuda othembekileyo, uyise weZizwe.
16:2 Abazalwana baseListra naseIkoniyo ezinikezelwa ubungqina kulungileyo.
16:3 UPawulos wayefuna lo mntu ukuba ahambe naye, nokuthatha kuyo, yena wamalusa, ngenxa yamaYuda abekwezo ndawo. Kuba bonke babemazi uyise ukuba weeNtlanga.
16:4 Ke kaloku njengoko babehamba betyhutyha izixeko, babanikela kubo iimfundiso ukuba igcinwe, leyo emiswe ngabapostile namadoda amakhulu aseYerusalem.
16:5 kwaye ngokuqinisekileyo, Amasonto kuthathwa womelela ngokholo yaye ziyanda mihla.
16:6 ke, athi nge ilizwe laseFrigi nelaseGalati, ukuba babesifa, uMoya oyiNgcwele ukuthetha iLizwi e Asia.
16:7 Bakuba befikile e eMisiya, bazama ukuya nakwelaseBhitini, kodwa uMoya kaYesu wayengazivumeli.
16:8 ke, xa bawelileyo nge eMisiya, ukuba bayehla eTrowa.
16:9 Yaye ngombono ebusuku yatyhilwa uPawulos ndoda ithile Macedonia, emi apho asithethelela, esithi: "Wela eMakedoni uze usincede!"
16:10 ke, emva, akuwubona umbono lowo, safuna thina kwaoko ukuba baya Macedonia, ekubeni Qiniseka ukuba uThixo usibizela ukuba ivangeli kubo.
16:11 Kwaye sisuka eTrowa, ukuthatha indlela ngqo, safika eSamotraki, yaye ngosuku olulandelayo, e INeyapoli,
16:12 ukusuka apho waya eFilipi, Nguwo lowo umzi avelele kummandla Macedonia, ikoloni. Ngoku ke kuloo mzi imihla ethile, yokunikwa ndawonye.
16:13 ke, ngomhla wesabatha, sihamba ngaphandle kwesango, ecaleni komlambo, apho kubonakala khona ukuba imbutho umthandazo. Akuba ehleli phantsi, samana sithetha ndawonye nabafazi elibe.
16:14 Kwaye kuphulaphula intokazi ethile, egama linguLidiya, umthengisi weengubo ezibomvu kwisixeko ezibomvu, okhonza uThixo, wamlalela. Ke iNkosi yayibaza ingqondo ukuba kufuneka azamkele izinto ezazithethwa nguPawulos.
16:15 Wenyuka naye, akuba ubhaptiziwe, nabendlu yakhe, ngenqaba nathi, bathi: "Ukuba ndikholiwe ukuba ndilikholwa ngenene eNkosini, ungene endlwini yam uze ufake apho. "Kwaye yena saqiniseka.
16:16 Ke kwenzeka ukuba, njengoko siya ukuba umthandazo, sisicakazana esithile, , sinomoya wemilozi, uhlangene nathi. Waba umthombo yenzuzo enkulu iinkosi zaso, ngokusebenzisa ekuvumiseni yakhe.
16:17 le ntombazana, sithene mbende noPawulos nathi, Wadanduluka, bathi: "Aba bantu bangabakhonzi bakaThixo Osenyangweni uThixo! Baya bavakalisa kuni indlela yosindiso!"
16:18 Ngoku yena uphila ngale ndlela iintsuku ezininzi. kodwa uPawulos, ukuba lusizi, guququ, wathi kuwo umoya, "Ndikuwisela umthetho, egameni likaYesu Krestu, ukuba aphume kuyo. "Yaye wahamba kwangelo lixa.
16:19 Kodwa iinkosi zaso, abone ukuba liphumile ithemba lenzuzo yazo bemka, babanjwa uPawulos noSilas, yaye bazisa ke nabaphathi bamaYuda kwenkundla.
16:20 Nokunikezela kubo abathetheli, bathe: "Aba bantu basiphazamisa isixeko sethu, ekubeni bangamaYuda.
16:21 Kwaye ke ndibhengeza indlela apho ekungavumelekileyo ukuba siwamkele, nokuba siwenze, ekubeni thina Roma aba. "
16:22 Kwaye abantu baphuma ndawonye nxamnye nabo. Yaye oomantyi, nihlinza neengubo zawo, luhlelwe ukuba kubethwa ngeentonga.
16:23 Ke bakuba bebabethe neziniya emininzi, babaphosa entolongweni, ngokuyalela abalindi ukuba wati kubo ngenkuthalo.
16:24 Yaye ekubeni wamkela olu hlobo ukuze, yena wabaphosa esiseleni sentolongo ingaphakathi, yaye imiqathango iinyawo zabo nemithi.
16:25 ke, ezinzulwini zobusuku, UPawulos noSilas babethandaza, bedumisa uThixo. Ke kaloku abo ke eluvalelweni ubaphulaphule.
16:26 kodwa ngokwenene, kwabakho inyikima ngequbuliso, bukhulu kangangokuba iziseko zentolongo bachukumiseka. Kwaye ngoko nangoko zonke iingcango zavuleka, kunye izibophelelo of bonke akhululwa.
16:27 Ke unogada, sele baba qwa, ebona iingcango zentolongo ukuvula, rhuthu ikrele lakhe yaye wayefuna ukumbulala yena, eba ababanjwa babalekile.
16:28 Kodwa uPawulos wamemeza ngelizwi elikhulu, bathi: "Musani ukubaphatha kakubi kuwe, kuba sikho sonke apha!"
16:29 Emva koko ubiza ukuba ukukhanya, yena wangena. nokungcangcazela, wawa phambi kweenyawo uPawulos noSilas.
16:30 Kwaye ebakhuthaza ngaphandle, uthe, "Madoda, kufuneka ndenze ntoni na, ukuze ndithe ukuze basindiswe?"
16:31 Ngoko bathi, "Kholwa kwiNkosi uYesu, kwaye ke uya kusindiswa, nendlu yakho. "
16:32 Kwaye ke wathetha iLizwi leNkosi kuye, kunye nabo bonke abo bonke ababesendlwini yakhe.
16:33 kwaye yena, ngokuthatha kwabo lixa lobusuku, wahlamba neziniya zabo. Waza wabhaptizwa, yaye ecaleni nendlu yakhe yonke.
16:34 Akuba Wabazisa endlwini yakhe, wasimisela itafile kubo. Yaye wena nqaba ivuyelelayo, nendlu yakhe yonke, ukukholelwa kuThixo.
16:35 Yaye xa siguquka sifike, oomantyi wathuma abalindi, bathi, "Khulula loo madoda."
16:36 Kodwa unogada wababanjwa la mazwi kuPawulos: "Abathetheli bathumele ukuba wena akhululwe. ke ngoko, mkani. Hamba ngoxolo. "
16:37 Kodwa uPawulos wathi kubo: "Basityabule ekuhleni, nangona singazange phantsi. abantu Bawisa bangamaRoma entolongweni. Kwaye ngoku ke, babeza ukuqhuba us kude ngasese? Ayikho njalo. kunokuba, ukubavumela beze phambili,
16:38 yaye ndibagxothe kude. "Emva koko ke abalindi la mazwi ukuya kwiinkundla zoomantyi. Kwaye phezu bakuva ukuba bangamaRoma, boyika.
16:39 baye kufika, bacela nabo, phambili ngaphandle, zaye zimbongoza ukuba baphume kuwo umzi.
16:40 Baza bemka ke intolongo leyo, baya kungena kwaLidiya. Bathi ke, bakubona abazalwana, ukuba ngcono kubo, kwaye ke banduluka.
KwiZenzo zabapostile 17
17:1 Ke kaloku, bakuba behamba beyihambile iAmfipoli neApoloni, bafika eTesalonika, apho kwakukho indlu yesikhungu yamaYuda.
17:2 ke uPawulos, ngokwesiko, wangena kubo. Waye iisabatha ezintathu, bebangisana nawo ngeZibhalo,
17:3 ukutolika wenza ukuba kwakuyimfuneko ngoKristu ukubandezeleka aze avuke kwabafileyo, nokuba "lo Yesu Kristu, lowo ke ndibhengeza kuni. "
17:4 Ke abathile kuwo yakholwa, anamathele uPawulos noSilas, kwaye inani elikhulu kwezi zazivela kubanquli kunye iintlanga, ababa mbalwa amabhinqa amanene.
17:5 Kodwa amaJuda, unomona, kwaye ukujoyina nabenza ezithile phakathi kwabantu abaqhelekileyo, wabangela ukuba baphazamise, yaye avusa umzi. Wathabatha up isikhundla kufutshane nendlu kaYason, Baya befuna ukuba ndibakhuphe ebantwini.
17:6 Bakuba ke bazichola, amrholela uYason nabazalwana abathile kubaphathi bomzi, ememeza: "Kuba aba ngabo ndimvelisile umzi. Kwaye beza apha,
17:7 yaye uYason ubamkele. Kwaye bonke aba bantu benza okuchasene nemimiselo kaKesare, besithi, Kukho kumkani wumbi, UYesu. "
17:8 Kwaye wamvusela abantu. Kwaye ke kubaphathi bomzi, akuva ezi zinto,
17:9 waza wafumana ingcaciso evela Jason kunye nabanye, babakhulula.
17:10 kodwa ngokwenene, abazalwana bathumela nangoko uPawulos noSilas ngobusuku, ukuba baye eBhereya. Bathe ke bakuba befikile, bangena kwindlu yesikhungu yamaYuda.
17:11 Kodwa La ke aye enobuntu ngaphezu kwabo e eTesalonika. La wona alamkela ilizwi ngentumekelelo yonke lihlombe, ezincina ngemihla iZibhalo ukuze abone ukuba ezi zinto ukuze.
17:12 yaye eneneni, abaninzi bakholwa phakathi kwabo, kwakunye ababa mbalwa phakathi kwabantu eeNtlanga obekekileyo kunye nabasetyhini.
17:13 ke, akuva amaJuda aseTesalonika waqonda ukuba iLizwi likaThixo Kwakhona washumayela nguPawulos naseBhereya, baya khona nabo, azizamazamisa kwaye ephazamisayo isihlwele.
17:14 Kwaye ngoko ke abazalwana bathumela uPawulos kude, ukuze ahambe ngolwandle. Kodwa ooSilas noTimoti wahlala khona.
17:15 Ke abo babeqhuba uPawulos bamzisa eAthene. Yaye akuba ebuyile, ebamkele umyalelo kuye ooSilas noTimoti, ukuba beze kuye ngokukhawuleza, Banduluka.
17:16 Ke kaloku ngoxa uPawulos ubalindile eAtene, umoya wakhe kwakudalwa ngaphakathi kuyo, ulinxuwa nje umzi sinikelwa uzizithixo.
17:17 Kwaye, bebangisana ndawonye amaYuda endlwini yesikhungu, kunye nabanquli, nakwiindawo zikawonke, lonke usuku ngalunye, nge imaphi apho.
17:18 Ngoku zefilosofi ezithile zamaEpikure zawo babephikisana naye. Kwaye abanye bathi, "Yintoni le Umhlwayeli iLizwi ofuna ukuyithetha?"Kodwa abanye babesithi, "Ubonakala azisi amadimoni abatsha." Kuba nivakalisa kubo uYesu kunye nokuvuka.
17:19 Kwaye ulahle, ke bamsa eAreyopago, bathi: "Ngaba uyakwazi siyive na le mfundiso intsha, othetha ngazo?
17:20 Kuba uzisa iingcamango ezithile ezintsha ezindlebeni zethu. Kwaye ke singathanda ukwazi ukuba yintoni na ezi zinto. "
17:21 (Ke kaloku bonke abantu baseAthene, baye kufika iindwendwe, babehlala endlini bona kunye nto ngaphandle ukuthetha okanye ukuva izimvo ezintsha ezahlukeneyo.)
17:22 kodwa uPawulos, simi esazulwini seAreyopago, wathi: "Madoda aseAthene, Ndiyabona ukuba kunokuba nincamisile ukuhlonela ezintweni zonke.
17:23 Kuba njengoko wayedlula kwaye embona izithixo zakho, Kwakhona ndafumana nesibingelelo, apho kubhalwe: UKUBA UTHIXO, kongaziwayo. ngoko ke, into nimhlonelayo ningamazi, le nto ndiya ukushumayela kuwe:
17:24 UThixo yena, owenza ihlabathi neento zonke ezikuwo, Lowo ke iNkosi yezulu nomhlaba, ngubani akahlali zitempileni zenziwe ngazandla.
17:25 Kananjalo akaphiliswa zizandla zabantu, ngokungathi abaswele nantoni, kuba nguye onika zonke izinto ubomi nomphefumlo, nazo zonke ezinye.
17:26 Yaye uye wenza, ngaphandle kwelinye, zonke usapho loluntu lwaza: ukuba aphile phezu kobuso bomhlaba wonke, ukumisela amaxesha amisiweyo nemida yokuma kwazo,
17:27 ukwenzela ukuba ndibacelele icebo kuThixo, ukuba mhlawumbi ukuze bathi kuye okanye bayifumane, nakuba ingekude kuthi sonke ngabanye.
17:28 'Kuba kuyo sihleli, ekunene kwaye ushukume, yaye sikho. 'Kanye njengokuba neembongi ezithile zenu zitshilo. 'Kuba nathi intsapho yakhe.'
17:29 ngoko ke, ekubeni yentsapho kaThixo, asimele ingqalelo igolide okanye isilivere okanye amatye anqabileyo, okanye nemikrolo zobugcisa kunye ukuyila umntu, ukuba umelo oko Divine.
17:30 yaye eneneni, uThixo, wakhangela phantsi ukubona intswela kula maxesha, ngoku waxelela abantu ukuba bonke ezindaweni zonke ukuba enze izono.
17:31 Kuba ngokokuba emise umhla, aza kuligweba ngawo ihlabathi equity, ngaye lo ayimiseleyo, umnikelo ukholo bonke, ukholo ngokuyivusa kwabafileyo. "
17:32 Bathe ke bakukuva malunga Ukuvuswa kwabafileyo, kanjalo, abanye derisive, ngoxa abanye bathi, "Siza kukuphulaphula ngale kwakhona."
17:33 Ke uPawulos wemka phakathi kwabo.
17:34 kodwa ngokwenene, amadoda athile, unamathela kuye, Wayekholwa. nabo phakathi kwabo abo kwaye anoDiyonisiyo waseAreyopago, nomfazi ogama linguDamari, nabanye ndawonye nabo.
KwiZenzo zabapostile 18
18:1 Emva kwezi zinto, ukuba neAtene, wafika eKorinte.
18:2 Kwaye phezu ukufumana umYuda othile ogama linguAkwila, owazalelwa ePonto, kutshanje owayefike evela eItali, noPrisila umkakhe, (ngenxa yokuba uKlawudiyo wayeyalele onke amaYuda emke eRoma,) ke wadibana nabo.
18:3 Kuthe ke, ngenxa yokuba belilinye ishishini labo, Walala nabo esebenza. (Ngoku umsebenzi wabo yayikukwenza iintente.)
18:4 Yaye ukuxambulisana endlwini yesikhungu iisabatha ngeesabatha, ukungenisa igama leNkosi uYesu. Kwaye ke amaYuda kwanamaGrike ukucenga.
18:5 Kwaye xa uSilas noTimoti bafika eMakedoni, Wema ke uPawulos ngokuqinileyo kwiLizwi, waqononondisa kumaYuda ukuba uYesu lo nguye uKristu.
18:6 Kodwa ukusukela ukuba limphikisa kwaye Uyanyelisa, wavuthulula iingubo zakhe, wathi kuwo: "Igazi lakho eliphezu kwentloko yakho. Mna ndimsulwa. Ukususela ngoku ukuya phambili, Ndiya kuya kwiintlanga. "
18:7 Nokusuka kuloo ndawo, Okokuba wangena endlwini yomntu othile, ogama koliLungisa, okhonza uThixo, ogama adjoined kwindlu yesikhungu endlwini.
18:8 Now uKrispo, inkokeli yesikhungu, sakholwayo eNkosini, kunye nendlu yakhe yonke. Kwaye abaninzi eKorinte, ukuzwa, yakholwa, babhaptizwa.
18:9 UNdikhoyo ke wathi uPawulos, ngombono ebusuku: "Sukoyika. kunokuba, athethe phandle kwaye ungathi tu.
18:10 Ngokuba ndinawe. Yaye akukho namnye uya abambelele kuwe, ukuze sakwenza nto imbi. Kuba abantu abaninzi kule dolophu kunye nam. "
18:11 Wandula ke wahlala apho unyaka neenyanga ezintandathu, efundisa ilizwi likaThixo phakathi kwabo.
18:12 Ke kaloku, akubon 'ukuba uGaliyo ulibamba kwelaseAkaya, amaYuda amvukela ngamxhelo mnye uPawulos. Balizisa kuye esihlalweni sokugweba,
18:13 bathi, "Yena ukweyisa abantu ukuba bamhlonele uThixo ngokunxamnye nomthetho."
18:14 ke, xa uPawulos liqala ukuvula umlomo wakhe, Wathi uGaliyo kumaYuda: "Ukuba ngaba lo ezinye mbandela sikweni, okanye yesenzo esibi, O amaJuda nengqondo, Bendiya ukuxhasa wena, njengoko kubafaneleyo.
18:15 Kodwa ukuba ngokwenene ezi imibuzo malunga ngelizwi, namagama, nomthetho wakho, kufuneka ubone ukuba nina. Andiyi kuba ngumgwebi wezo zinto. "
18:16 Waza wathi kubo sokugweba.
18:17 kodwa bona, sibopha uSosithene, inkokeli yesikhungu, ambetha phambi kwesihlalo sokugweba. UGaliyo Akabonakalisanga inkxalabo ukuba ezi zinto.
18:18 kodwa ngokwenene, Paul, emva kokuba wahlala iintsuku ezininzi, ukuba ntle wathi abazalwana, saqonda Syria, kunye naye ke enoPrisila noAkwila. Ngoku wayechetyiwe intloko eKenkreya, kuba wayenze isifungo.
18:19 Kwaye weza e-Efese, waza wabashiya ngasemva apho. kodwa ngokwenene, yena ngokwakhe, wangena endlwini yesikhungu, ephikisana namaYuda.
18:20 ke, nangona amcela ukuba ahlale ixesha elide, akavuma uyavumelana.
18:21 kunokuba, esithi ndlelantle kwaye ebaxelela, "Ndiza kubuyela kuni kwakhona, Xa uThixo evuma,"Wanduluka Efese.
18:22 Kwaye emva kokuba wehla waya eKesareya, wenyuka waya eYerusalem, wambulisa eCaweni apho, waza wehla waya kwa-Antiyokwe.
18:23 Ke kokuchitha ezinye ubude bexesha apho, yaqonda, waza wahamba ukuze walityhutyha ilizwe laseGalati, nelaseFrigi, ebomeleza bonke abafundi.
18:24 Ke kaloku umYuda othile ogama Apollo, wazalwa e Alexandria, indoda efundileyo lowo unamandla iZibhalo, weza e-Efese.
18:25 Waye wafunda ngeNdlela yeNkosi. Waza evutha ngumoya, uYesu ethetha kwaye efundisa izinto uYesu, kodwa esazi kakuhle ubhaptizo lukaYohane.
18:26 Kwaye, waqalisa ukwenza ngokuthembeka kwindlu yesikhungu. Xa uPrisila noAkwila weva ngaye, Bamthabatha bucala wase umchazela indlela yeNkosi kuye ngokuphelele.
18:27 ke, kuba wayefuna ukuba aye kwelaseAkaya, abazalwana babhala ndibabongoza abafundi, ukuze kumamkela. Ke kaloku, akufika uSawule, ukuba ibambe iingxoxo ezininzi kwabo bakholwa.
18:28 Kuba yena wasiphikisa kwaye esidlangalaleni ukusola amaYuda, ngokutyhila ngeZibhalo ukuba uYesu unguye uKristu.
KwiZenzo zabapostile 19
19:1 Ke kaloku kwathi,, ngoxa Apollo aseKorinte, Paul, emva kokuba badlula njengemimandla ephezulu, weza e-Efese. Waza wadibana nabafundi ezithile.
19:2 Wathi ke yena kubo, "Emva kokuba akholelwe, Zihlobo, ingaba uzakulamkela uMoya oyiNgcwele?"Bathi ke bona kuye, "Siye Asizanga sive nokuva ukuba kukho uMoya oyiNgcwele."
19:3 kodwa ngokwenene, uthe, "Ke ngoko abaye uye wabhaptizwa?"Kwaye bathi, "Nobhaptizo lukaYohane kuphela."
19:4 Wandula ke uPawulos wathi: "UYohane wabhaptiza abantu ubhaptizo lwenguquko, esithi ebantwini, mabakholwe kulowo uzayo emva kwakhe, yiyo i, kuYesu. "
19:5 Akuva ezi zinto, babhaptizwa egameni leNkosi uYesu.
19:6 Uthe uPawulos wabeka izandla zakhe phezu kwabo, wehla uMoya oyiNgcwele phezu kwabo. Baye bethetha ngeelwimi, beprofeta.
19:7 Ke kaloku amadoda lawo malunga alishumi kuzo zonke.
19:8 ke, engena kwindlu yesikhungu, wathetha ngokuthembeka iinyanga ezintathu, exoxa nabantu, ebeyisela kubo ubukumkani bukaThixo.
19:9 Kodwa xa abathile baba lukhuni kwaye abazange bakholwe, nengqalekiso Indlela kaNdikhoyo phambi kwezihlwele, Paul, wabaleka waza, wabahlula abafundi, exoxa imihla ngemihla esikolweni ethile sikaTirano.
19:10 Ke kaloku oku kwenziwa yonke iminyaka emibini, ukuze bonke abahlala Asia waliphulaphula iLizwi leNkosi, kokubini amaYuda nabeeNtlanga.
19:11 UThixo akanakwenza imimangaliso enamandla kwaye ingaqhelekanga ngesandla uPawulos,
19:12 kangangokuba naxa amalaphu ezincinane kunye nezandla ngezithandelo kwaziswa ivela emzimbeni wakhe, zisuke kubo izifo, izigulo wemka kubo waza wemka noomoya abangendawo.
19:13 ke, nokuba ezinye abahambahambayo abhadulayo yamaYuda bazama ukulibiza igama leNkosi uYesu phezu kwabo kwabanoomoya abakhohlakeleyo, bathi, "Mna bakubophe ngazo ngoYesu, lowo uvakaliswayo nguPawulos. "
19:14 Kwaye kukho amaJuda athile, ke nyana bathile basixhenxe bakaSkeva, iinkokheli phakathi kwababingeleli, ababenengqiqo ngale ndlela.
19:15 Kodwa umoya ongendawo baphendula bathi kubo: "UYesu ndiyamazi, noPawulos ndiyamazi. Kodwa nina ningoobani na?"
19:16 Kwaye le ndoda, kuye kwabakho umoya ongendawo, ukugxuma at kubo ukufumana ngcono kubo bobabini, waboyisa, ngokokude babaleke kuloo ndlu, bengxwelerhiwe, beze.
19:17 Kwaye, oko kwazeka kuwo onke amaYuda nabeeNtlanga ababehlala e-Efese. Kunye angenwa kukoyika phezu kwabo bonke. Kwaye igama leNkosi uYesu mkhulu.
19:18 Abakholwayo abaninzi ukufika, bevuma, yaye eshumayela izenzo zabo.
19:19 Ithe ngoko into eninzi abo balandela amahlelo odd bazizisa ndawonye iincwadi zabo, baza bawayazitshisa phambi kwabo bonke. Kwaye emva kokuba ukumisela ixabiso lezi, bafumana amaxabiso ukuba amawaka mahlanu leedenariyo.
19:20 Ngele ndlela, iLizwi likaThixo ukuba ukwanda ngamandla kwaye ukuba kuqinisekiswa.
19:21 ke, xa ezi zinto zaye zagqitywa, UPawulos wagqiba ngoMoya, emva awela elityhutyhile elaseMakedoni nelaseAkaya, ukuya eYerusalem, bathi, "Emva koko, emva kokuba bekukho, kuyimfuneko ukuba nam bona naseRoma. "
19:22 Kodwa uthumela ababini kwabo zazimlungiselela, UTimoti noErasto, eMakedoniya, yena wahlala ixesha e Asia.
19:23 Ke kaloku, ngelo xesha, kwabakho inkathazeko engencinane ngayo iNdlela le weNkosi.
19:24 Kuba uthile, ogama linguDemetriyo, umkhandi wesilivere ngokwenza iitempile zesilivere zika-Artemis, ke ukubonelela akukho nzuzo encinane iingcibi.
19:25 Wabiza ndawonye, nabo ebebeqeshwe ngendlela efanayo, uthe: "Madoda, niyazi ukuba ingeniso kwethu oko kuphuma kulo msebenzi.
19:26 Kwaye ke niyibonayo niyivayo ngoku ukuba lo mntu uPawulos, yi ukukholisa, sele isukile isihlwele esikhulu, nje kuphela Efese, kodwa phantse yonke Asia, bathi, 'Ezi zinto azikho oothixo eziye eyenziwe ngezandla.'
19:27 Ngaloo ndlela, nje kuphela lo, umsebenzi wethu, sengozini eziswa ukulahla, kodwa ke itempile wothixokazi omkhulu uArtemis iza bebalelwe ekubeni yinto engento! Ke ngisho ubungangamsha bayo, ngaye yonke lelaseAsiya liphela nelimiweyo, iya kutshatyalaliswa. "
19:28 Bakukuva oku, bazaliswa ngumsindo, bakhala, bathi, "Mkhulu uArtemis wabase-Efese!"
19:29 Kwaye ke umzi uphela sisidubedube. Wayibamba uGayo noAristarko of Macedonia, amaqabane of Paul, baphumela kabuhlungu, ngamxhelo mnye, kulo nkundla.
19:30 ke, xa uPawulos, enga angangena ebantwini, abafundi ungamvumeli.
19:31 Yaye ezinye iinkokeli avela kwelaseAsiya, ngubani bengabahlobo bakhe, Kwakhona wathumela kuye, becela ukuba ukubakho kule amphitheatre.
19:32 Kodwa abanye bedanduluka izinto ezahlukeneyo. Kuba ibandla labe lidubadubekile, kwaye abaninzi babengazi isizathu sikhe wabizela ndawonye.
19:33 Ngoko ke amrholela Alexander esihlweleni, ngoxa amaYuda ezweni kuye phambili. and Alexander, othuka ngesandla sakhe ukuze cwaka, wayefuna ukunika abantu inkcazo.
19:34 Kodwa kamsinya nje beqonda ukuba ungumJuda, benza inzwinini enye bonke, malunga neeyure ezimbini, babedanduluka, "Mkhulu uArtemis wabase-Efese!"
19:35 Xa umbhali sixambulisene izihlwele, uthe: "Madoda ase-Efese, Kaloku kukho ntoni na umntu ongaziyo, ukuba umzi wase-Efese kwinkonzo wothixokazi omkhulu kunye nenzala Jupiter?
19:36 ngoko ke, ekubeni ezi zinto nako aphikise, kuyimfuneko ukuba ube uzolile kwaye ukwenza nto irhashalala.
19:37 Kuba niwazise phambili la madoda, angengabo ekuthiwa ziingcwele, nabanyelisi anyelise isithixokazi yakho.
19:38 Kodwa ukuba uDemetriyo neengcibi ezinaye ityala nxamnye naye nabani, ukuba abize kwiinkundla, akho namabamba;. Makhe mabamangalelane.
19:39 Ke ukuba nifuna ukubuza malunga nezinye izinto, oku kunokwenziwa isigqibo kwesesikweni intlanganiso.
19:40 Kuba ngoku esengozini yokuba enetyala ngesiphendu iziganeko zanamhlanje thina, ekubeni akukho mntu unetyala (lowo bakwazi ukunika ubungqina thina) kule ndibano. "Akuba etshilo, wayindulula intlanganiso.
KwiZenzo zabapostile 20
20:1 ke, emva isiyaluyalu yaphela, Paul, ubiza abafundi kuye, ukhuthaza ukuba, evalelisa. Yena waphuma, ukuze aye eMakedoni.
20:2 Ke kaloku, akubon 'ukuba bahamba loo ndawo yaye wabavuselela kunye iintshumayelo ezininzi, waya e Greece.
20:3 Emva kokuba wachitha iinyanga ezintathu apho, treacheries ezazicwangciselwe ngaye ngamaYuda, kanye njengoko wayeza kuya ngomkhombe kwelaseSiriya. Ke kaloku baye bacetyiswe le, yena acande kwelaseMakedoni ngokubuya.
20:4 Ngoku nabo wayehamba naye nguSopatro, unyana ka nguSopatro bevela eBhereya; kwaye kananjalo kwabaseTesalonika, UAristarko noSekundo; noGayo waseDerbhe, noTimoti; kwaye kananjalo nguTikiko noTrofimo evela Asia.
20:5 le, emva kokuba ephumile ngaphambi, walinda eTrowa.
20:6 kodwa ngokwenene, thina ngomkhombe eFilipi, emva kwemihla yezonka ezingenagwele, saza emva kweentsuku ezintlanu saya kubo eTrowa, apho sahlala khona iintsuku zasixhenxe.
20:7 ke, ngeSabatha lokuqala, xa babedibene ukuba baqhekeze isonka, UPawulos wayexoxa nabo, engxamele ukuze ebekwe ngosuku olulandelayo. Kodwa wayolula intshumayelo yakhe phakathi kobusuku.
20:8 Ke kaloku kwakukho intabalala izibane kwigumbi eliphezulu, apho sasihlanganisene.
20:9 Kwaye ofikisayo othile ogama linguYutiko, ehleli kwi window wethala, ke sisindwa phantsi ukozela enzima (kuba uPawulos wayeshumayela ku- ubude). ke, njengoko waya kulala, wawa kwigumbi kumgangatho wesithathu phantsi. Ke kaloku, akubon 'ukuba waphakamisa, yena ufile.
20:10 Xa uPawulos wehla waya kuye, wangqengqa phezu kwakhe yena, wayisingatha, wathi, "Sukubanexhala, ngokuba umphefumlo wakhe ngaphakathi kuye. "
20:11 Kwaye, ukuya phezulu, kunye nesonka ngokwaphula, kunye nokudla, yaye uthethe kakuhle kwi kwada kwasa, ke ebekwe.
20:12 Ngoku ke nayo inkwenkwe iphila, yaye ngaphezu kokuba bamthuthuzela kancinane.
20:13 Emva koko wakhwela esikhitshaneni inqanawa wawelela eAso, apho sasiza kuthatha uPawulos. Kuba ngokunjalo yena ngokwakhe isigqibo, ekubeni ukuba owenza uhambo umhlaba.
20:14 Ke kaloku, akubon 'ukuba wazibandakanya nathi eAso, sathatha kuye, kwaye sahamba eMitilene.
20:15 Kwaye sisuka khona, ngosuku olulandelayo, sifika Chios malungana. Kwaye elandelayo safika sagaleleka eSamo. Yaye ngemini elandelayo saya eMileto.
20:16 Kuba uPawulos wagqiba kwelokuba kudlulwe ngomkhombe e-Efese,, ukuze ukuba akasayi zilibaziseke Asia. Kuba wakhawuleza ukuze, ukuba unako, ukuze bagcine umhla wepentekoste eYerusalem.
20:17 ke, ukuthumela ukusuka eMileto e-Efese, wabiza abo omkhulu ngokuzalwa ebandleni.
20:18 Abathe bakubon 'ukuba beze kuye babendawonye, Wathi yena kubo: "Niyazi ukuba ukususela kwimini yokuqala xa Ndingene Asia, Ukuhlala kwam nani, kuba ixesha lonke, ngale ndlela:
20:19 ndikhonza eNkosini, konke ukuthobeka kwaye nangona iinyembezi kunye nokulingwa okwandihlelayo evela treacheries amaYuda,
20:20 indlela Ndamlumana nto yayibaluleke, indlela ndanishumayezayo kuwe, ukuba ndinifundise ekuhleni ngokwezindlu zooyise,
20:21 ndiqononondisa kuma Yuda kwabeeNtlanga ngenguquko kuThixo nokholo kwiNkosi yethu uYesu Kristu.
20:22 Kwaye ngoku, khangela, kokuba onyanzelekileyo emoyeni, Ndiya mna eYerusalem,, ndingazazi izinto eziya kundihlela khona,
20:23 ndanele ukwazi ukuba uMoya oyiNgcwele, kuyo yonke imizi, kuye sivule me, esithi imixokelelwane neembandezelo kum balindele eYerusalem.
20:24 Kodwa endinxunguphala yiyo nanye yezi zinto. Abatsho kanjalo nobomi bam ukuba exabiseke ngakumbi kuba ndizenzele mna, ukuba ngandlela thile ukuze ugqibe ikhondo lam yaye ubulungiseleli kweLizwi, endalwamkelayo eNkosini uYesu, Axel 'iindaba ezilungileyo zobabalo lukaThixo.
20:25 Kwaye ngoku, khangela, Ndiyazi ukuba uya basakubona ubuso bam, nonke ndahambayo phakathi kwenu ndihambe, eshumayela kubo ubukumkani bukaThixo.
20:26 Ngesi sizathu, Mna ndinqula wena ngamangqina ngalo olu suku: ukuba mna ndimsulwa egazini labo bonke.
20:27 Kuba Andithi gu bucala kwi kancinane lokuvakalisa lonke icebo likaThixo kuni.
20:28 Thatha umonge nina umhlambi yonke, apho uMoya oyiNgcwele kwiindawo njengoko Bishops ukuba alawule ibandla likaThixo, leyo eye yathengwa ngegazi lakhe.
20:29 Ndiyazi ukuba emva kokumka kwam iingcuka eziqwengayo kuya kungena phakathi kwenu, zingawucongi umhlambi.
20:30 Yaye phakathi kwenu, abantu baya kuvuka, athetha izinto ezigwenxa ukuze ukuwexula abafundi emva kwawo.
20:31 Ngenxa yale nto, zivule, nokugcina kwinkumbulo ukuba yonke iminyaka emithathu, andiyekanga, ubusuku nemini, ziinyembezi, ukuba abongoze ngamnye wenu.
20:32 Kwaye ngoku, Ndiyaniyaleza kuThixo nakwilizwi lobabalo lwakhe. Unawo amandla ukwakha, kwaye aninike ilifa bonke abangcwalisiweyo.
20:33 Andinqwenelanga okanye isiliva negolide, nor nezambatho,
20:34 njengokuba nisazi nani ngokwenu. Kuba oko kwakufuneka ndim nokuba ngabo nam, ezi zandla ziye.
20:35 Ndisityhile zonke izinto kuwe, ngenxa yokuba benza ngale ndlela, kuyimfuneko ukuxhasa ababuthathaka ukuba nikhumbule amazwi eNkosi yethu uYesu, ukuba yena wathi, 'Ukupha kunoyolo ukupha ngaphezu kokuphiwa.' "
20:36 Waza akuba ezitshilo ezi zinto, waguqa ngamadolo, wathandaza kunye nabo bonke.
20:37 Ke isililo esikhulu yenzeka phakathi kwabo bonke. and, yawela phezu entanyeni kaPawulos, ke wamanga,
20:38 bebindekile uninzi lonke ilizwi abewathethile, ukuba baya kuze babone ubuso bakhe. Balizisa kuye emkhombeni.
KwiZenzo zabapostile 21
21:1 Ke kaloku, emva kwezi zinto zenzeka, akuba wahlukana eyenziwayo kubo, saqonda ikhosi ngqo, Ukufika eKos, yaye olulandelayo ngosuku eRhodes, ukusuka apho waya ePatara.
21:2 Ke kaloku sithe, wafumana inqanawa inqanawa ngaphesheya eFenike, ukucaca lulahla, saqala uhambo.
21:3 ke, emva kokuba ubanjwe ukubona iSipro, ngokugcina yona ekhohlo, saqonda ukuba Syria, yaye sifika eTire. Kuba umkhombe uza ubuya kuyithula apho impahla.
21:4 ke, Safumana abafundi, thina bahlala khona iintsuku zasixhenxe. Baye besithi kuPawulos, ngaye uMoya, ukuba akayi ukuba angenyuki aye eYerusalem.
21:5 Ke kaloku, xa iintsuku zagqitywa, obeka, sahamba phezu; nabo bonke kunye nathi kunye nabafazi nabantwana babo, saba ngaphandle komzi. Yaye saguqa phantsi elunxwemeni wathandaza.
21:6 Ke kaloku sithe, wathi ndlela-ntle omnye komnye, sakhwela bekhwele kule nqanawa. Baza babuyela ezabo.
21:7 kodwa ngokwenene, ekugqibile uhambo lwethu ngesikhephe ukusuka eTire, sehlela ukuya eTolemayi. Kwaye bebingelela abazalwana, we ezifakwe nabo usuku olunye.
21:8 ke, emveni kokusuka ngosuku olulandelayo, safika eKhesariya. Kwaye phezu sangena endlwini kaFilipu, umshumayeli weendaba ezilungileyo, ngubani obengowabaya basixhenxe, sahlala naye.
21:9 Ke kaloku lo mntu wayeneentombi ezine, zintombi, ngubani beprofeta.
21:10 Kwaye ngoxa yalibaziseka iintsuku ezithile, umprofeti abathile bevela kwelakwaYuda, ogama linguAgabho, befika.
21:11 kwaye yena, xa eze kuthi, wathatha ibhanti kaPawulos, kwaye siyabophelela iinyawo nezandla zakhe, uthe: "Utsho ke uMoya oyiNgcwele: Indoda kabani ibhanti lo, amaYuda aya kuyibopha ngolu hlobo eYerusalem. Kwaye baya ayinikele ezandleni zeentlanga. "
21:12 Ke kaloku sithe, bakukuva oku, thina abo kuloo ndawo, ukuba angenyuki aye eYerusalem.
21:13 Wandula ke uPawulos waphendula wathi: "Yintoni na ukuphumeza ukulila awuthobe intliziyo yam? Kuba Ndilungise, ndingalungele kubotshwa kuphela, kodwa kwanokufa eYerusalem, ngenxa yegama leNkosi uYesu. "
21:14 Yaye ekubeni nako ukumcenga, we umgcini, bathi: "Ngamana ukuthanda kweNkosi."
21:15 ke, emva kwaloo mihla, ukuba amalungiselelo enziwe, siye wenyuka waya eYerusalem,.
21:16 Ke abathile nakubafundi abavela eKesareya nathi, beza ethile baseSipro ogama thina kuMnaso, umfundi omdala kakhulu, kabani iindwendwe besiya kuba.
21:17 Ke kaloku sithe, safika eYerusalem, abazalwana basamkela ngokuzithandela.
21:18 ke, ngosuku olulandelayo, UPawulos wangena kunye nathi kuYakobi. Yaye onke amadoda amakhulu babehlanganisene.
21:19 Ke kaloku Ubabulisile, wachaza into nganye ukuba uThixo sizigqibileyo phakathi kweentlanga, ngalo ulungiselelo lwakhe.
21:20 kwaye ke, akuva ukuba, mkhulu uThixo wathi kuye: "Uyaqonda, ubhuti, oko angako amawakawaka amaYuda akholiweyo, yaye onke anenzondelelo umthetho.
21:21 Ke kaloku baye beva ngawe, ukuba nifundisa abo amaYuda aphakathi kweentlanga, ukuba emke kuMoses, ebaxelela ukuba kufuneka makangabalusi abantwana bawo, okanye wenze ngokwesiko.
21:22 Yintoni elandelayo? Isihlwele kufanele ibizwe. Kuba aya kuva ukuba ufikile.
21:23 ngoko ke, ukwenza le nto esiyicelayo kuwe: Thina amadoda amane, abo baphantsi isifungo.
21:24 Thatha ezi ubangcwalise nabo ngokwakho, kwaye zifuna ukuba achebe iintloko zawo. Yaye ngoko wonk 'ubani uya kwazi ukuba izinto baye beva ngawe eziphosisayo, kodwa ukuba nawe ngokwakho uhambe ukugcina nomthetho.
21:25 kodwa, ngabo iintlanga ezikholiweyo, sabhala isigwebo ukuba azigcine koko sele immolated kwizithixo, nasegazini, yaye oko kuye suffocated, nakuhenyuzo. "
21:26 ke uPawulos, ngokuthatha la madoda ngosuku olulandelayo, ukuba uzenze nyulu kunye nawo, waza wangena etempileni, wayevakalisa inkqubo yeentsuku zokwenza nyulu, de ube ngumnikelo wokudla kuya kwenziwa egameni ngamnye kubo.
21:27 Ke kaloku, xa iintsuku ezisixhenxe wawufikelele ekugqityweni, abo amaYuda avela kwelaseAsiya, Bathi ke, bakubona kuye etempileni, yadala bonke abantu, baza babeka izandla phezu kwakhe, ememeza:
21:28 "Madoda akwaSirayeli, Nceda! Nanku lo mntu ufundisa, wonke, yonke indawo, okuchasene nabantu, nomthetho, nale ndawo. Ngaphezu, uye wazisa abantu beeNtlanga etempileni, yaye uye waphula le ndawo ingcwele. "
21:29 (Kuba abebone ngeenxa engaphambili uTrofimo wase, i Efese, esesixekweni kunye naye, abeba uPawulos umngenise etempileni.)
21:30 Kwaye yonke umzi wawuxhokonxa. Kwathi ukuba abantu babalekela ndawonye. Kwaye sibopha Paul, amrholela ngaphandle kwetempile. Kwaye zavalwa kwaoko iingcango.
21:31 ke, njengoko babefuna ukumbulala, kwaxelwa-waka yeqela: "Yonke IYerusalem ukudideka."
21:32 Kwaye, ngoko nangoko ukuthatha amasoldati nabathetheli-khulu, ke, waphaphatheka, wehla waya kubo. Bathi ke, bakubona-waka kunye namajoni, kwaphela ukubulala uPawulos.
21:33 Ke induna, iyasondela, embambile waza wayalela ukuba abotshwe ngemixokelelwane emibini. Yaye wayebuza ukuba angaba ungubani na, nokuthi wenze ntoni.
21:34 Ngoko bona bedanduluka izinto ezahlukeneyo ngaphakathi isihlwele. Yaye ekubeni angabi nako ukuqonda nantoni ngokucacileyo ngenxa yengxolo, ke yayalela ukuba makasiwe enqabeni.
21:35 Ke kaloku, akufika uSawule kwi ezitepsini, Kwathi ukuba wenyuselwa yi amajoni, ngenxa isisongelo zogonyamelo ezivela kubantu.
21:36 Kuba yayilandela inkitha yabantu alandelayo bedanduluka, "Msuse!"
21:37 Kwaye njengoko uPawulos wayeqalisa makasiwe enqabeni, wathi kumthetheli-waka, "Ngaba kuvumelekile na ukuba ndithethe into kuwe?"Wathi ke yena, "Uyazi Greek?
21:38 Ngoko ke, wena ukuba mYiputa wathi ngaphambi kwale mihla waxhokonxa imvukelo yaye waphuma waya entlango amawaka amane amadoda?"
21:39 Kodwa uPawulos wathi kuye: "Ndiyindoda, bala umJuda, wayevela eTarso yaseKilikiya, ngummi isixeko ezaziwayo-kakuhle. Mna ke simcele ukuba, ndivumele ndikhe ndithethe kubo abantu. "
21:40 Ke kaloku, akubon 'ukuba umvumele, Paul, wema uPawulos ematyeni okunyuka, UAlesandire wawangawangisa ngesandla kubo abantu. Kwaye xa kwaqhambuka cwaka, wayethetha nabo ngolwimi lwesiHebhere, bathi:
KwiZenzo zabapostile 22
22:1 "Abazalwana Noble noobawo, baphulaphule ingcaciso ngoku kukunika kuwe. "
22:2 Bathe ke bakumva ukuba uthetha nabo ngolwimi lwesiHebhere, kwabo banikela cwaka enkulu.
22:3 Wathi yena: "Mna ndingumntu ongumYuda, wazalelwa e eTarso yelaseKiliki, kodwa wakhulela kulo mzi ecaleni ezinyaweni zikaGamaliyeli, ndiqeqeshwe ngohlobo enyanisweni lomthetho woobawo, ewuzondelele umthetho, kanye njengoko nonke nina nabo unanamhla.
22:4 Ndingowayitshutshisayo yona le Ndlela, kuze kube sekufeni, ndibopha, ndifaka eluvalelweni amadoda kunye nabasetyhini,
22:5 kanye njengoko umbingeleli omkhulu nabo bonke abo enkulu ngokuzalwa inikela ubungqina kum. Ekubeni zincwadi kubo abazalwana, Xa ndiyayo eDamasko, ukuze ndibe kukhokelela ungakhonkxwa ukusuka apho waya eYerusalem, kubo, ukuze babethwe.
22:6 Kodwa kwenzeka ukuba, njengoko ehamba yaye agaleleke eDamasko emini, ngesiquphe evela ezulwini wabanekelwa ngeenxa zonke kum ukukhanya okukhulu.
22:7 Kwaye esiwa emhlabeni, Ndeva ilizwi lisithi kum, 'uSawule, uSawule, kutheni unditshutshisa nje?'
22:8 Ndaza ndasabela, 'Ungubani, Nkosi?'Wathi yena kum, 'Mna ndinguYesu waseNazarete, omtshutshisayo wena. '
22:9 Ke kaloku abo babekunye nam, kanjalo, wabona ukukhanya, kodwa abalivanga ilizwi lalowo wayethetha nam.
22:10 Ndaza ndathi, 'Ndingenza ntoni, Nkosi?'Yandula ke iNkosi yathi kum: 'Vuka, uye eDamasko. kwaye kukho, uya Undityele izinto zonke ekufuneka uyenze. '
22:11 Yaye ekubeni ukuba angabi nakubona, ngenxa yobumhlophe bolo lukhanyiselo, Mna ndarholwa ngesandla ngabo namaqabane sam, yaye, xa ndiyayo eDamasko.
22:12 Emva koko a Ananiya ethile, umntu ngokuvumelana nomthetho, ukuba ubungqina onke amaYuda ababehlala apho,
22:13 ukusondela kum, wema kufuphi, yathi kum, Sawule, mzalwana, ukubona!'Ke kaloku, kwangelo lixa, I ondele kuye.
22:14 Kodwa yena: 'UThixo woobawo bethu preordained kuwe, ukuze ukuba kuza ukwazi ukuthanda kwakhe yaye uya kubona koliLungisa, kwaye eve ilizwi eliphuma emlonyeni wakhe.
22:15 Ngokuba uya kuba lingqina lakhe kubo bonke abantu ngabo izinto ozibonileyo nozivileyo.
22:16 Kwaye ngoku, Yini na ukuba ukulibala? Vuka, baze babhaptizwe, kwaye uhlambe izono zakho, ngokuthandaza ngegama lakhe. '
22:17 Ke kwenzeka ukuba, xa ndabuyela eYerusalem yaye ndithandaza etempileni, ngalala engqondweni weza kum,
22:18 ndaza ndayibona isithi kum: 'Khawuleza! Suka ngokukhawuleza evela eYerusalem! Kuba abantu balapha abayi kubamkela ubungqina bakho ngam. '
22:19 Ndaza ndathi: 'Nkosi, bazi ukuba mna ndibetha kwaye ziluvingcile entolongweni, kuyo yonke esinagogeni, abo bakholwayo kuwe.
22:20 Kwaye xa igazi ingqina lakho uStefano wathulula, Ndema kufuphi wayevumelene, kwaye ndabaphaphelayo iingubo zabo bambulale. '
22:21 Wathi yena kum, 'Phuma. Kuba mna ndithumela ukuba kude kwiintlanga. ' "
22:22 Ngoku bayaziva kuye, de lo gama, yaye emva koko, baza baphakamisa izwi labo, bathi: "Ndigcinele olu hlobo kude emhlabeni! Kuba ubesifanele ukuba baphile!"
22:23 Kwathi sokukhwaza, kwaye iyisa phantsi iingubo zabo, ezikhupha uthuli esibhakabhakeni,
22:24 -waka yayalela ukuba makasiwe enqabeni, kunye bobethwa kwaye wahlukunyezwa, ukuze ukufumana isizathu sokuba bona bedanduluka ngale ndlela ngaye.
22:25 Bathe ke bakuba wambopha iirholithi, Wathi uPawulos kumthetheli-khulu obemi ngakuye, "Kuvumelekile na, ukuba nimtyakatye umntu ongumRoma, kwaye ke asicinywanga uselegwetyiwe?"
22:26 Bakukuva oku, umthetheli-khulu, waya-waka, ingxelo ngayo kuye, bathi: "Yintoni na uzimisele ukuyenza? Kuba lo mntu ungumRoma. "
22:27 Ne-waka, yokusondela, wathi kuye: "Ndixelele. Ingaba wena ungumRoma?"Ngoko wathi, "Ewe."
22:28 Kwaye-waka waphendula, "Ndzi teke le ubumi ngeendleko ezinkulu." Wathi ke uPawulos, "Ke mna ndizelwe kulo."
22:29 ngoko ke, abo babehamba besiya ukungcungcuthekisa kuye, nangoko wemka kuye. -Waka wayesoyika efanayo, emva kokuba waqonda ukuba wayengummi waseRoma, ngokuba wambopha.
22:30 Kodwa ngosuku olulandelayo, befuna ukufumanisa ngakumbi ngenkuthalo kukuba amangalelwe ngayo ngamaYuda yintoni isizathu, wamkhulula kuye, waza wayalela ababingeleli ukuba abize, kunye nebhunga lonke. and, ukuvelisa Paul, wammisa phakathi kwabo.
KwiZenzo zabapostile 23
23:1 ke uPawulos, ebekade ngenyameko kwibhunga, wathi, "Abazalwana Noble, Mna ndingathethanga ngokwalowo ungowakwaThixo, ndinesazela esilungileyo phambi koThixo, kude kube namhla. '
23:2 Ke umbingeleli omkhulu, Ananiya, wayalela abo babemi kufuphi ukuba bambethe emlonyeni.
23:3 Waza wathi uPawulos kuye: "UThixo uya kukubetha, ludongandini luqatyiweyo! Kuba wena ahlale Uligwebe ityala lam ngokomthetho, nini, ngokunxamnye nomthetho, uyala ukuba ndibethwe?"
23:4 Kwaye abo babemi athi, "Ngaba bethetha okubi ngayo umbingeleli omkhulu kaThixo?"
23:5 Wathi ke uPawulos: "Bendingazi, bazalwane, ukuba nguye umbingeleli omkhulu. Kuba kubhaliwe kwathiwa: 'Uze ungathethi kakubi inkokheli yabantu bakho.' "
23:6 Ke kaloku uPawulos, esazi ukuba elinye iqela icala lelabaSadusi, elinye ke lelabaFarisi, wathi ku kwibhunga: "Abazalwana Noble, Mna ndingumFarisi, unyana ka abaFarisi! Kuba phezu ithemba nangovuko lwabafileyo endimangalelwayo mna nini. "
23:7 Ke kaloku, wathi le, impambano kwenzeka phakathi kwabaFarisi nabaSadusi. Yahlulelana inkitha leyo.
23:8 Kuba abaSadusi bathi akukho luvuko, kanye nazingelosi, okanye imimoya. Kodwa abaFarisi bazivuma zombini ezo.
23:9 Emva koko kwabakho unkqangazo olukhulu. Ke abathile babaFarisi, nivuka, elwa, bathi: "Asifumani nanye into embi kulo mntu. umoya Kuthekani ukuba uthethe kuye, okanye ingelosi?"
23:10 Yaye ekubeni ke, yakuba nkulu impambano esasenziwe, -waka, esoyikela ukuba uPawulos angaqwengwa bebodwa ngabo, loo majoni ukuba esihla phezu kwakhe, ukumbamba phakathi kwabo, nokuba umzise enqabeni.
23:11 ke, ngobusuku elandelayo, iNkosi yema ngakuye, yathi: "Yiba njalo. Kuba kanye njengokuba waqononondisa izinto ngam eYerusalem, Ngokunjalo ke kuyimfuneko ukuba ubungqina naseRoma. "
23:12 Kwaye xa kufika ukukhanya, amanye amaYuda bahlanganisana ndawonye Azibopha wabafungisa, esithi ukuba angadli angaseli ade ambulale uPawulos.
23:13 Ke kaloku kwakukho amadoda angaphezu kwamashumi amane obeyithabathe le sifungo kunye.
23:14 Kwaye ke wasondela iinkokheli zababingeleli, nabadala, yaye bathi: "Thina sifunge thina walamla ngesifungo, ukuze siya singafaki nto, side simbulale uPawulos.
23:15 ngoko ke, kunye nebhunga, kufuneka ngoku ukunika isaziso-waka, ukuze eze naye kuni, ukuba ubufuna ukumisela into ngaye. Kodwa ngaphambi kokuba isondela, senze amalungiselelo ukuze bambulale. "
23:16 Ke kaloku, akukuva unyana wodade boPawulos weva le, ngokukhohlisa kwabo, wahamba waza wangena enqabeni, waza waxelela uPawulos.
23:17 ke uPawulos, Ebizele kuye omnye wakubathetheli-khulu, wathi: "Yisa le ndodana kumthetheli-waka. Kuba inento eza kuyibika kuye. "
23:18 yaye eneneni, yena wamthabatha waza wamsa kumphathi-waka, wathi yena, "uPawulos, umbanjwa, wacela ukuba ndizise le ndodana kuwe, kuba inento eza kuyithetha kuwe. "
23:19 Ke induna, ukuthatha kuye ngesandla, wemka naye ngokwabo, waza wabuza ukuba: "Yintoni na le nto kufuneka ukuba undixelele?"
23:20 Ke wathi: "AmaYuda wadibana ukuba ukukucela ukuba umhlise uPawulos, umse ngomso ukuya kwibhunga, ukuba bahlalele ukumbuza ngento enye.
23:21 kodwa ngokwenene, kufuneka ungamkholelwa kuzo, ngokuba baza lokumlalela kunye ngamadoda angaphezu kwamashumi amane phakathi kwabo, akuba eyithethele walamla ngesifungo ukuba angadli, angaseli, baze bambulale. Kwaye zilungele ngoku, ngethemba lokuba utsho kuwe. "
23:22 Kwaye ngoko ke waka wayindulula ke indodana leyo, emyala ukuba bangaxeleli nabani na ukuba wenza eyaziwa ezi zinto kuye.
23:23 ke, wabiza yekhulu ezimbini, Wathi yena kubo: "Lungisani amajoni angamakhulu amabini, ukuze aye eKesareya, asixhenxe abamahashe, kunye namakhulu amabini amarhamncwa asengcongolweni, kuba kuselilixa lesithathu lobusuku.
23:24 Nokulungiselela namaqegu ukwenza Paul, ukuze, ndimalathise bamse kuFelikis, irhuluneli. "
23:25 Ngokuba ubesoyika, hleze amaYuda ukuze bambambe, bambulale, yaye emva koko uya ngamanga imangalelwe, ngathi nguye ndamkele imali yokuval. Kwaye ngoko yena wabhala incwadi equlethe okulandelayo:
23:26 "Claudio Shuckburgh, kwirhuluneli incamisileyo, Felix: ukubingelela.
23:27 lo mntu, ukuba abanjwa ngamaYuda yaye yayisele iza kubulawa ngawo;, ndayihlangula, hlamarisaka nabo amajoni, ekubeni Ndaqonda ukuba ingumRoma.
23:28 Yaye efuna ukwazi isizathu sokuba Math kuye, Ndayihlisa entlanganisweni yawo yamatyala.
23:29 Kwaye Ndafumanisa ukuba imangalelwe ngeembuzwano zomthetho wawo. kodwa ngokwenene, nto ifanele ukufa okanye ukuvalelwa kwaba phakathi isityholo.
23:30 Ndathi kuye banikwe iindaba imilalela, ababebulungisile ngaye, Ndithumele kuwe, ekwaziseni nakubamangaleli bayo,, ukuze ndimangalelane izityholo zabo phambi kokuba. Ndlela-ntle. "
23:31 Amasoldati ke ngoko, ukuthatha uPawulos ngokwemiyalelo yawo, wamngenisa kuye ebusuku eAntipatri.
23:32 Yaye ngemini elandelayo, ngokuthumela abamahashe, ukuba bahambe naye, babuyela enqabeni.
23:33 Bathe ke bakuba bafika eKesareya waza bayinikela incwadi kwirhuluneli, bammisa noPawulos phambi kwayo.
23:34 Uthe ke akuba wayifunda waza wacela nguwuphi na iphondo, eqonda ukuba ungowelaseKiliki, uthe:
23:35 ", Ndokuva, xa bathe bafika nabamangaleli bakho ufikile. "Waza wayalela ukuba makagcinwe endlwini yerhuluneli uHerode.
KwiZenzo zabapostile 24
24:1 ke, emva kweentsuku ezintlanu, umbingeleli omkhulu, uHananiya wehla abathile abadala kunye elinguTertulo ethile, isithethi. Kwaye baya bengabamangaleli bakaPawulos kwirhuluneli.
24:2 Ke kaloku wabiza uPawulos, UTertulo waqala yokummangalela, bathi: "Uninzi Felix elihle, ekubeni sinazo uxolo olukhulu ngawe, kunye nezinto ezininzi ukuze alungiswe ngolwalathiso lwakho,
24:3 siyakubulela oku, njalo futhi yonke, kunye nezenzo ngombulelo ukuze yonke into.
24:4 Kodwa ke, hleze mna ndithetha kwi enkulu kakhulu ubude, Ndiyakucenga, yi kwejaji yakho, ukuphulaphula sithi.
24:5 Siyifumene le ndoda isisifo, ukuba avuselele iziphendu phakathi kwawo onke amaYuda kwihlabathi lonke, kwaye ukuba umbhali isiphendu walo ihlelo lamaNazarete;.
24:6 Yaye uye sele uzama bahlukumeze etempileni. Ke kaloku embambile, sasifuna ukuba bagwetywe ngomthetho wethu.
24:7 kodwa uLisiya, -waka, hlamarisaka ngathi ngogonyamelo olukhulu, hlasi kwakhe kude ezandleni zethu,
24:8 ndathi nakubamangaleli bayo, ukuba eze kuni. ukusuka kwabo, wena uya kukwazi, ngokuba ukugweba ngazo zonke ezi zinto, ukuqonda isizathu ukuba bammangalele. "
24:9 Ke ngoko amaJuda interjected, esithi ezi zinto ukuze.
24:10 ke, ekubeni ke irhuluneli wababonisa kuye ukuba athethe, uPawulos waphendula: "Ukwazi ukuba ukhe ungumgwebi kolu hlanga iminyaka emininzi, Ndiya kukunika ingcaciso ngokwam komphefumlo ngokunyaniseka.
24:11 Kuba, njengoko ungase ubone, siye kuphela akuntsuku zingaphezu kweshumi elinambini, ndenyukayo ndaya kunqula eYerusalem.
24:12 Kwaye abazange ningandifumani etempileni ndixoxisana naye nabani na, okanye ndibangela rally abantu: nasezindlwini zesikhungu, naphi phakathi komzi.
24:13 Yaye nako ukuzimisa izinto ngazo ngoku icala.
24:14 Ke ndiyakuvuma oku kuwe, ukuba ngokutsho hlelo, abathi bona i qhekeko, ndenjenjalo ukumkhonza uThixo uBawo, Ukukholelwa konke okubhaliweyo emyalelweni nabaProfeti,
24:15 ukuba nethemba kuThixo, apho abanye aba bona nabo ukuba, ukuba kuza kubakho uvuko elizayo lwamalungisa kwanolwabangemalungisa.
24:16 Kwaye kule, Mna ngokwam ndisoloko ndizama ukuba nesazela ukusilela nayiphi sikhubekisa nganto ngakuThixo nangakubantu.
24:17 ke, emva kweminyaka emininzi, Ndaya kuhlanga lwakowethu, ndizisa amalizo neminikelo nezifungo,
24:18 I apho wafumana intlambululo yokusihlambulula etempileni: kungabi ne sihlwele, asizanga sibe isiphithiphithi.
24:19 Kodwa amaYuda avela kwelaseAsiya ngabo kufuneka avele phambi kwakho kum nimmangalele, ukuba angaba anendawo ngakum.
24:20 Okanye mabathi bona aba bantu balapha mabatsho ukuba kukho kum ubutshinga, nabuphi na, ngexesha bemi phambi kokuba ibhunga.
24:21 Kuba ngoxa ndimi phakathi kwabo, Ndathetha phandle kuphela ngale ndawo enye: ngovuko lwabafileyo. Oku ngale nto endimangalelwayo mna nini namhla nguwe. "
24:22 ke Felix, emva kokuba ukubuzisisa ulwazi okuninzi malunga nale Ndlela, wakugcina ulindile, ngokuthi, "Xa athe wehla uLisiya umthetheli-waka ufikile, Mna ndiya kuwuwisa ukuva kuwe. "
24:23 Waza wayalela-khulu, ukuba amgcine, kwaye ukuba niphumle, kwaye hayi ukuba ithintele nayiphi na abakhe ngokukhonza kuye.
24:24 ke, emva kweentsuku ezithile, Felix, ukufika enoDrusila umkakhe yena ungumJuda, wambiza uPawulos, waza wamphulaphula malunga ngokukholwa kuKristu Yesu.
24:25 Kwaye emva kokuba wathetha malunga ubulungisa nobunyulu, kwaye ngomgwebo elizayo, Felix yanyikima, yena waphendula: "Okwangoku, hamba, kodwa uhlale phantsi abalindi. ke, ngexesha elifanelekileyo, Ndokubiza uze. "
24:26 Kwakhona wayethembe ukuba wonikwa imali ukuze anikwe kuye nguPawulos, kwaye ngenxa yoko, ke njalo wabiza kuye waza wathetha naye.
24:27 ke, kwakubon 'ukuba kudlule iminyaka emibini, UFelikis wakhululana Portius uFesto. Yaye ekubeni uFeliks wayefuna ukubonisa ubabalo ethile kumaYuda, wamshiya uPawulos ngasemva njengebanjwa.
KwiZenzo zabapostile 25
25:1 Kwaye, Uthe ngoko uFesto, akuba efikile kwelo phondo, emva kweentsuku ezintathu, , wenyuka waya eYerusalem, esuka eKesareya.
25:2 Ke iinkokheli zababingeleli, nabo ngowokuqala phakathi kwamaJuda, waya bammangalela uPawulos. Baye ebongoza kuye,
25:3 becela ukuba abababale ngaye, ukuba iyalele ukuba kwakhokelela eYerusalem, apho kugcinwe abalaleli ukuze bambulale endleleni.
25:4 Ke uFesto waphendula uPawulos ukuba ugcinwe eKesareya, naye ke ngokwakhe uza kuya kamsinya khona.
25:5 "Ngoko ke," uthe, "Abo phakathi kwenu abakwaziyo, kuhla ngexesha elifanayo, ukuba kukho naliphi na ityala le ndoda, ukuze bammangalele. "
25:6 ke, ukhe wahlala phakathi kwabo ngaphezulu akukho ngaphezu kweentsuku ezisibhozo okanye ishumi, yena wehla waya eKesareya. Ke kaloku ngomhla olandelayo, wahlala esihlalweni sokugweba, waza wayalela ukuba uPawulos ukuba Uyabakhokela.
25:7 Akuba wayekhuliswe, amaYuda abehle evela eYerusalem, amngqonga, basikhupha izityholo ezininzi kakhulu, akukho nanye kuzo bakwazi ukubonisa.
25:8 UPawulos wanikela eli ukuziphendulela: "Nxamnye noMthetho wamaYuda, nanxamnye netempile, nakuKesare, na bekhubeka nawuphi na umcimbi. "
25:9 kodwa uFesto, efuna ukubonisa ndathanda kumaYuda, waphendula uPawulos wathi: "Ngaba ukulungele ukunyukela eYerusalem agwetywe apho ngokuphathelele ezi zinto phambi kwam?"
25:10 Uthe ke uPawulos: "Ndimi yamatyala kaKesare, leyo apho limele ukuthethwa khona ityala. Andenzanga nto imbi kumaJuda, njengokuba nawe usazi kakuhle.
25:11 Kuba xa ndithe olimeleyo kuzo, okanye ukuba ndenze nantoni na efanele ukufa, Andazi ukuba amelane ukuba afe. Kodwa ukuba akukho nanye yezo zinto bandimangalela ngazo ngalo, akukho namnye unako ukundinikela kubo. Ndibhenela kuKesare. "
25:12 ngoko uFesto, uthethe kunye nebhunga, basabela: "Wena ubengabhenele kuKesare, uya kuya kuKesare uya kuhamba. "
25:13 Ke kaloku, kwakubon 'ukuba kudlule imihla ethile, kumkani Agripa, noBhernike wehla waya eKesareya, sibingelela uFesto.
25:14 Yaye ekubeni bahlala khona iintsuku ezininzi, UFesto wathetha le kumkani ngoPawulos, bathi: "Umntu othile wasala ngasemva njengebanjwa nguFelikis.
25:15 Xa eYerusalem, iinkokheli zababingeleli kunye namadoda amakhulu amaYuda weza kum ngaye, becela ukuba sokulahlwa.
25:16 Ndathi kubo ukuba akukho Asilosiko lamaRoma asihambisani umntu, ngaphambi kokuba otyholwa sele langutane nabamangaleli bakhe, uye wafumana ithuba lokuzithethelela, ukuze asuse ngokwakhe zentlawulo.
25:17 ngoko ke, bakuba befikile apha, ngaphandle ukulibaziseka, ngosuku olulandelayo, uhleli esihlalweni sokugweba, Ndathi ukuba nayo indoda.
25:18 Kodwa xa abamangaleli ukuba bema, abazange nokumenzela ityala ngaye apho ndiza basole ububi.
25:19 kunokuba, bazisa kuye iimpikiswano ezithile malunga ngokuhlonela kwabo izithixo kwaye malunga noJesu othile, ababefile, kodwa yena uPawulos uhleli.
25:20 ngoko ke, ngokuba ndiyathingaza olu hlobo mbuzo, Ndambuza ukuba wayezimisele ukuya eYerusalem aze agwetywe apho ngokuphathelele ezi zinto.
25:21 Kodwa ekubeni uPawulos nomtsalane ukuba agcinelwe isigqibo phambi Augustus, Ndathi makagcinwe, ndide ndimthumele kuKesare. "
25:22 Wathi ke uAgripa kuFesto: "Nam ndifuna ukuva umntu." "Ngomso," uthe, "Uya kumva ngomso."
25:23 Ke kaloku ngomhla olandelayo, xa uAgripa noBhernike bafika kunye noqhankqalazo lobu omkhulu waza wangena kwiholo kunye nabathetheli kunye namadoda aziintloko esixeko, UPawulos wasiwa kwi, ngokomyalelo uFesto.
25:24 Wathi uFesto: "Kumkani Agripa, nabo bonke abo akhoyo kunye nathi, niyambona lo mntu, ethe yonke inkitha yamaYuda waphazamiseka ngam eYerusalem, ebongoza, umsindo ukuba akayi kuvunyelwa ukuba baphile ubomi.
25:25 Ngempela, Ndiye ndafumanisa nto wavelisa ngaye nto ifanelwe kukufa. Kodwa ekubeni yena ngokwakhe ubhenele kuMhlekazi, ke isiko lam, ukuba amthume.
25:26 Kodwa ndagqiba ukuba babhalele umlawuli ngaye. Ngenxa yale nto, Oko ndimzise phambi kwenu nonke, ngokukodwa phambi kwakho, Kumkani Agripa, lo nto, kanye uphenyo kuye kwenzeka, Ndibe nento endingayibhalayo.
25:27 Kuba kum kubonakala ibubudenge, ukuba kuthunyelwe ikhonkxwa, hayi ukuba zibonise izityholo wammisa ngakuye. "
KwiZenzo zabapostile 26
26:1 kodwa ngokwenene, Wathi ke uAgripa kuPawulos, "Ukuba kuvunyelwa ukuba athethe nawe." Wandula ke uPawulos, ukwandisa isandla sakhe, baqala ukunikela lokuzithethelela.
26:2 "Mna ndicinga ukuba andimntu usikelelweyo, Kumkani Agripa, ukuba ukunika ukuzithethelela kwam namhla phambi kwakho, ngayo yonke into, endakuwisela endimangalelwayo ngamaYuda,
26:3 ngokukodwa ekubeni wazi yonke into ephathelele kumaYuda, zombini amasiko kunye nemibuzo. Ngenxa yale nto, Ndiya kukhunga ukuba ukuphulaphula ngenyameko.
26:4 kwaye ngokuqinisekileyo, onke amaYuda ukwazi ngobomi bam kwasebuncinaneni bam, ezazikade ekuqaleni kwayo phakathi kwabantu bam eYerusalem.
26:5 Babesazi kakuhle ukususela ekuqaleni, (ukuba bangathanda ukuba anikele ubungqina) kuba ubomi, ngelona uzimisele zonqulo lwethu: njenge umFarisi.
26:6 Kwaye ngoku, oko ngethemba lesithembiso esenziwa nguThixo kobawo bethu ukuba ndimi necala lokwahlulelwa.
26:7 Yeyona Promise ukuba izizwe zethu ezilishumi, ekhonza ubusuku nemini, ndiyathemba ke ukuba ndokubona. Ngeli themba, O nkosi, Endimangalelwayo ngamaYuda.
26:8 Yini na ukuba bagwetywe akukholeleki ukuze nani nonke, ukuba uThixo uyabavusa abafileyo?
26:9 kwaye ngokuqinisekileyo, Mna ngokwam ngaphambili ingqalelo ukuba kufanele senze ngeendlela ezininzi leyo ezichasene negama likaYesu waseNazarete.
26:10 Oku yindlela wenza eYerusalem. Kwaye, Ndafaka abantu abaninzi abangcwele entolongweni, ndakuba ndamkele igunya iinkokheli zababingeleli. Ke kaloku, xa babeza kubulawa, Ndawakhupha isigwebo.
26:11 Kwaye zonke izindlu zesikhungu, njalo ngexesha uyabohlwaya, I ndibanyanzela ukuba banyelise. Kwaye ngumbono ngakumbi ngabo, Ndabatshutshisa, ndada ndesa kwimizi engaphandle.
26:12 emva koko, njengoko wayeya eDamasko, ndinegunya nemvume evela umbingeleli omkhulu,
26:13 emini, O nkosi, Mna abo nam, sihamba ngendlela ukukhanya kuvela ezulwini, kundibanekela ngeenxa zonke kum ubungangamsha obungaphezu ilanga.
26:14 Ke kaloku thina sonke lisadalele phantsi, Ndaza ndeva izwi lithetha nam ngentetho yesiHebhere: 'uSawule, uSawule, kutheni unditshutshisa nje? Kunzima ukuba ukhaba iimviko. '
26:15 Ndathi ke, 'Ungubani, Nkosi?'Yathi iNkosi, 'NdinguYesu, omtshutshisayo wena.
26:16 Vuka, ume ngeenyawo zakho. Kuba ndibonakele kuwe ngenxa yoku: ukuze ndisimise ube ngumkhonzi nengqina ngokuphathelele izinto enizibonileyo, nangokuphathelele izinto endiya kukubonisa kuwe:
26:17 eyophula ezizweni kunye neentlanga ukuba mna ke ndikuthumelela,
26:18 ukuze uvule amehlo abo, ukuze kuguqulwa ebumnyameni, beze ebumhlotsheni, ; babuye egunyeni likaSathana, beze kuThixo, ukuze bamkele uxolelo lwezono, indawo phakathi kwabangcwele, ngokukholwa kum. '
26:19 Ukususela ngoko, Kumkani Agripa, I wayengekho ingakholiweyo umbono wasezulwini.
26:20 Kodwa ke washumayela, yokuqala abo eDamasko nabaseYerusalem, kwaye ke lonke ilizwe lakwaYuda, nasezintlangeni, ukuze bona baguquke kwaye baguqukele kuThixo, ukwenza imisebenzi efanele inguquko.
26:21 Kwaba ngenxa yesi sizathu ukuba amaYuda, akuba ukumbamba me xa etempileni, wazama ukumbulala me.
26:22 Kodwa ngenxa incediswa ngoncedo lukaThixo, kuzise kule mini, Ndimi ubungqina abancinane nabakhulu, ndingathethi nanye into ngaphandle kwezo abathi abaprofeti noMosis wathi wayeza kuba kwixesha elizayo:
26:23 ukuba uKristu eve ubunzima, nokuba wayeza kuba ngowokuqala ukusuka uvuko lwabafileyo, nokuba wayeza kuzisa ukukhanya ebantwini nakwiintlanga. "
26:24 Akubon 'ukuba uyazithetha ezi zinto nokunikezela eziphendulela, UFesto wathi ngezwi elikhulu: "uPawulos, wena hlanya! ukufunda okuninzi kakhulu umfulathele ukuba engqondweni. "
26:25 Wathi ke uPawulos: "Hayi andinguye ngamageza, Festo odume kunene, kodwa kunokuba mna amazwi enyaniso, benesidima ndithetha.
26:26 Ngokuba ukumkani uyazazi ezi zinto. Ukuze naye, Mna ndithetha rhoqo. Kuba ndicinga ukuba akukho nanye kwezi zinto ayaziwa kuye. Kwaye kananjalo Kwakugqitywa oko egumbini.
26:27 Ngaba kubaProfeti, Kumkani Agripa? Ndiyazi ukuba uyakholelwa. "
26:28 Wathi ke uAgripa kuPawulos, "Ukuya kwenye indawo, undeyisela ukuba ndibe ngumKristu. "
26:29 Wathi ke uPawulos, "Ndiyathemba kuThixo ukuba, zombini ubukhulu amancinci ubukhulu elikhulu, wena wedwa, kodwa bonke abo abandivayo namhlanje uya kuba kanye njengokuba nam ndixelisa, ngaphandle kwezi ntambo. "
26:30 Ke kaloku ukumkani wavuka, nerhuluneli, noBhernike, yaye abo babehleli kunye nabo.
26:31 Ke kaloku beshenxile, baye bethetha bodwa, bathi, "Lo mntu akenzanga nto ilingene ukufa, okanye avalelwe entolongweni. "
26:32 Wathi ke uAgripa kuFesto, "Lo mntu ange enokukhululwa, ukuba ubengabhenele kuKesare. "
KwiZenzo zabapostile 27
27:1 Ngoko kwagqitywa kwelokuba ndimthumele kuye ngenqanawa eItali, nokuba uPawulos, kunye nabanye elugcinweni, kufuneka zisiwe kumthetheli-khulu, ogama linguYuliyo, yeqela of Augusta.
27:2 Emva kokonyuka nokhwele inqanawa evela eAdramitiyami, sanduluka baza baqalisa ukukhangela ecaleni amazibuko Asia, ne uAristarko, i-Macedonian evela eTesalonika, ngokuza kubanathi apha.
27:3 Yaye ngemini elandelayo, safika eTsidon. yaye uYuliyo, wamphatha uPawulos enovelwano, wamvumela ukuba aye ezihlotyeni zakhe, ukujonga emva ngokwakhe.
27:4 Ke kaloku sithe, kundulukwe khona, thina Batyhubela ngezantsi kweSipro, ngenxa yokuba imimoya ibivela ngaphambili.
27:5 Kwaye siwele nangona elwandle olungaseKiliki kwelasePamfili, safika eListra, olukuye waseLikiya.
27:6 Apho ke umthetheli-khulu wafumana umkhombe wakwa ukusuka Alesandire, usiya kwelaseItali, waza wasifudusela kuyo.
27:7 Ke kaloku sithe, zanela iintsuku ezininzi yaye wasinda bafika sifike ngaseKinido, ngokuba umoya ekuthiyeni thina, sabetha ezantsi kweKrete, kufuphi ngaseSalimone.
27:8 Kunye nokukwazi ukuba kudlulwe kulo ngokulambisa, safika kwindawo ethile, leyo kuthiwa Shelter Good, yaba umzi waseLaseya ecaleni kuyo.
27:9 ke, emva kokuba kudlule ixesha elaneleyo, kwaye ukususela losuka akusayi kuba bubulumko kuba Day olukhawulezayo ngoku kudlule, UPawulos ngcono kubo,
27:10 Wathi ke yena kubo: "Madoda, Ndiyabona ukuba uhambo olu ngoku ingozi nenkxwaleko nokonakala okukhulu, nje kuphela kungekwamthwalo namkhombe, kodwa ukuba ubomi bethu. "
27:11 Kodwa umthetheli-khulu walibeka kuNdikhoyo ithemba ngakumbi ke umthetheli kunye Umatiloshe wenqanawa, ngakumbi izinto ezazithethwa nguPawulos.
27:12 Yaye ekubeni kwakungekho izibuko efanelekileyo apho ebusika, uluvo isininzi ukuba kundulukwe khona, ukuze ngandlela babe nako ukufika e eFenike, ukuze ubusika khona apho, kwi elichweba laseKrete;, ekhangele phandle kwintshonalanga engasezantsi, nakwintshonalanga.
27:13 Yaye ekubeni umoya wasezantsi ukuba wakubetha impepho, bacinga ukuba ukuze bafikelele usukelo lwabo. Kwaye emva kokuba Banduluka Asson, beba bakuzuzile ababekungxamele e eKrete.
27:14 Kodwa kungekudala emva koko, kweza oya kubo, ekuthiwa mpumalanga Wind.
27:15 Yaye xa inqanawa ebanjwe kulo awaba nako ukuba ubambane nomoya, ukupha phezu inqanawa le mimoya, ukuba saqhutywa.
27:16 ke, ukunyanzelwa ecaleni kwisiqithi esithile, ekuthiwa Umsila, thina babengakwazi ukubambelela kwiphenyane okulo kwesi sikhephe.
27:17 Xa oku wenyuselwa, benza ngayo ukunceda ekufumaneni inqanawa. Kuba besoyika ukuba bangeyela. Ke kaloku, bazifinyeza iiseyile, kwenziwe ukuba uqhutywa ngale ndlela.
27:18 ke, ekubeni thina ngapha nangapha ngamandla sisivuthuvuthu, ngosuku olulandelayo, baya kuwaphosa izinto onzima elwandle.
27:19 Kwathi ngomhla wesithathu, ngezandla zabo, baya kuwaphosa izixhobo le nqanawa elwandle.
27:20 ke, kwakubon 'ukuba akubonakali langa nankwenkwezi iintsuku ezininzi, akukho siphelo sichotho igalelekile, lonke ithemba ukhuseleko lethu ngoku asuswe.
27:21 Kwaye emva kokuba ezile ixesha elide, Paul, emi phakathi kwabo, wathi: "Ngokuqinisekileyo, abantu, ninge naniphulaphule kum, abanduluka eKrete, ukwenzela ukuba nale nkxwaleko noku konakala.
27:22 Kwaye ngoku, makhe sikucenga ukuba ube nesibindi umphefumlo. Kuba akukho uya kulahlekelwa bubomi bakhe, kodwa kuphela lomkhumbi.
27:23 Kuba isithunywa sikaThixo, ngubani wabelwe kum, endimkhonzayo, yema ecaleni kum ngobu busuku,
27:24 bathi: 'Sukoyika, Paul! Kuyimfuneko ukuba nime phambi koKesare. kwaye qaphelani, UThixo awunike kuni ngabo bonke abasemkhombeni nawe. '
27:25 Ngenxa yale nto, abantu, ube nesibindi umphefumlo. Kuba ndithembile uThixo ukuba oku kuya kwenzeka ngendlela efanayo ukuba ndixelelwe kum.
27:26 Kodwa kuyimfuneko ukuba sifike kwisiqithi esithile. "
27:27 ke, emva kokufika ubusuku beshumi elinesine, sakubon 'ukuba siwele elwandle lwaseAdriya, malunga phakathi kobusuku, oomatrose babekholelwa ukuba babona inxalenye inxalenye yalomhlaba.
27:28 Kwathi kwangoko afake i ubunzima, bafumana bezingenabunzulu mabini izantya. Kunye nomgama ukusuka apho, bafumana nobunzulu imitsi elinesihlanu.
27:29 ke, yokoyika ukuba kwenzeka kwiindawo ezirhabaxa, baphosa iiankile ezine ngaphandle wayesemva, yaye wayethembe ukuba emini ukufika kungekudala.
27:30 kodwa ngokwenene, ukuba oomatrose bangxamele indlela ukubaleka baphume emkhombeni, kuba bewuhlisele lesikhitshane elwandle, benze ukuba uzama kuyekelela iankile ngaphambili enqanaweni.
27:31 Ngoko uPawulos kumthetheli-khulu nakumasoldati, "Ngaphandle kokuba aba bantu bahlale emkhombeni, uya kuba nako ukuze basindiswe. "
27:32 Ngoko amasoldati wayityatya izintya kwiphenyane okulo, yaye bavunyelwe ukuba liwele.
27:33 Kwaye xa waqala ukuba ukukhanya, UPawulos wacela ukuba bonke ke ukutya bakuthatha, bathi: "Le yimini elinesine ukuba sele ulindile nokuqhubeka fast, bengathabathanga nto.
27:34 Ngesi sizathu, Ndiya kukhunga ukuba ukwamkela ukutya ngenxa yempilo yakho. Kuba akuyi kuwa nalunwele lwentloko kabani kuni uya kutshabalala. "
27:35 Waza akuba ezitshilo ezi zinto, ukuthatha isonka, wabulela kuThixo emehlweni abo bonke. Uthe ke begqobhozile, waqala ukudla.
27:36 Bonke ke baba enoxolo kakhulu emphefumlweni. Kwaye bathabatha ukudla nabo.
27:37 Ngempela, thina yimiphefumlo amakhulu amabini, anamanci asixhenxe anamithandathu.
27:38 Zathi ke, ziyalelwe wondliwa nokutya, benza lula umkhombe, bephosa ingqolowa elwandle.
27:39 Ke kaloku ngosuku sifike, abazange baqaphele kwendawo. kodwa ngokwenene, Bambona ugwebu ethile emxinwa ukuba linonxweme, ezo babecinga ukuba kunokuba lula ukuba nyanzela inqanawa.
27:40 Bathi ke, bezinqumla zonke iiankile, baziyekela elwandle, ngexesha elifanayo bezikhulule kunye ziingxaki zemithi yokujika. Kwaye, nokuvusa iseyilana ngasemoyeni ngesantya, ziqhubeka ukuya elunxwemeni.
27:41 Kwaye xa Kwathi phezu kwindawo evulekileyo ukuba enolwandle ngeenxa zombini, wangqubeka khona umkhombe. yaye eneneni, isaphetha, ukuba akasakwazi, wahlala fixed, kodwa ngokwenene umva yayilihlwili ngenxa yesiphithi-ulwandle.
27:42 Athe ngoko amasoldati yagqiba ukuba bambulale amabanjwa, ukuze kungabikho, emva obalekayo yi ukuqubha, abalekele.
27:43 Kodwa yekhulu, azame ukuba uPawulos, engavunyelwa ukuba yenziwe. Waza ke wayalela abo bakwaziyo ukudada ukutsiba kuqala, ukuze basinde, nokuze elizweni.
27:44 Ke bona abanye, ezithile bamthwala kwiibhodi, kunye nabanye kwezo zinto ekule nqanawa. Kwaye ke kaloku, basinda ezweni yonke umphefumlo.
KwiZenzo zabapostile 28
28:1 Kwaye emva kokuba besindile, ngoko ndaqonda ukuba isiqhithi eso kuthiwa yiMelita. kodwa ngokwenene, bendawo basinika akukho ngemali encinci unyango elingcono.
28:2 Kuba bawuphumzile sonke ngokuthi ukuphembelela umlilo, ngokuba wemvula igalelekile nangenxa yokubanda.
28:3 Ke kaloku, akubon 'ukuba uPawulos utheze ndawonye inyanda ngamasetyana, waza wayibeka phezu komlilo, lerhamba, leyo batsaleleke ubushushu, yanamathela esandleni sakhe.
28:4 inene, xa balapho babona irhamncwa ijinga esandleni sakhe, athi omnye komnye: "Ngokuqinisekileyo, lo mntu ungumbulali, Kuba nakuba esindile elwandle, hayi kophindezelwa akumvumeli ukuba aphile. "
28:5 Kodwa enikina le emlilweni isilo, okunene agule.
28:6 Kodwa bazindla ukuba kungekudala uza kudumba, aze ke athi qwaka, afe. Kodwa akuba walinda ixesha elide, akabona imiphumo yoko kuye, baziguqula iingcinga zabo, bathi ukuba unguthixo.
28:7 Ke phakathi kwabo abo zindawo amafa ephethwe yi ngumlawuli siqithi, ogama linguPubliyo. kwaye yena, ukuthatha thina, basibonisa iindwendwe hlobo iintsuku ezintathu.
28:8 Kwathi ke, uyise kaPubliyo walala egula yifiva kunye segazi. UPawulos wangena kuye, yaye akuba bathandaza, wayecinezele ngezandla zakhe phezu kwakhe, Wabasindisa kuye.
28:9 Xa oku kwenziwe, bonke ababenezifo kwi siqithi Basondela baphiliswa.
28:10 Kwaye ngoko ke nathi thaca basenzela iimbeko ezininzi. Ke kaloku thina sikulungele ukuba kundulukwe, Bamnika esothi edingekayo.
28:11 Kwaye, emva kweenyanga ezintathu, sanduluka apho ngenqanawa saseAleksandriya, igama layo 'i Castors,'Kwaye ukuba ubusika esiqithini.
28:12 Ke kaloku sithe, xa sifika laseSirakuse, thina zalibaziseka apho iintsuku ezintathu.
28:13 ukusuka apho, umkhumbi kufutshane elunxwemeni, safika eRegiyo. Emva kosuku olunye, kunye kuvuthuza umoya wasezantsi, sifika ngomhla wesibini ePuteyoli.
28:14 Pha, emva indawo abazalwana, siye sacelwa ukuba sihlale nabo iintsuku zibe sixhenxe. Kwaye ngoko ke waya eRoma.
28:15 kwaye kukho, xa abazalwana lodaba kuthi, Aphuma aya kumkhawulela kuthi ukuya kufikelela Forum ka-Apiyo kunye naseTavene-Ntathu. Ke kaloku uPawulos wabona ukuba, bemdumisa uThixo, waba nesibindi.
28:16 Ke kaloku sithe, safika eRoma, UPawulos wanikwa imvume ukuba azihlalele yedwa, kunye nejoni ukuba amgcine.
28:17 Kwaye emva kosuku lwesithathu, wabizela ndawonye abaziintloko bamaYuda. Bakuba ke wabiza, Wathi yena kubo: "Abazalwana Noble, Mna, ndingenzanga nto ichasene nabantu, nanxamnye namasiko akhe koobawo, kodwa Wanikelwa nje eYerusalem ndingumbanjwa, ndanikelwa ezandleni zamaRoma.
28:18 Kwaye emva kokuba ukuviwa ngam, babeza khulula me, ngenxa yokuba kungekho tyala ukufa kum.
28:19 Kodwa amaYuda ethetha ngokunxamnye nam, Ndanyanzeleka ukuba ndibhenele kuKesare, nakuba kwaba kungekhona ngokungathi ndandinayo naluphi na uhlobo yokulumangalela ngayo uhlanga lwakowethu siqu.
28:20 Kwaye, ngenxa yale nto, I ukuba ndinibone ndize ndithethe kuni. Kuba kungenxa yethemba lakwaSirayeli ukuba ndirha- lo mxokelelwane. "
28:21 Kodwa bathi kuye: "Thina awuyifumenanga iileta ngawe bevela kwelakwaYuda, kungekho naziphi na ezinye abafikayo phakathi kwabazalwana waxela okanye wathetha nantoni na embi ngawe.
28:22 Kodwa sicela ukuva izimvo zakho kuwe, kuba ngale hlelo, siyazi ukuba uThixo uthethile nxamnye yonke. "
28:23 Ke kaloku, bakummisela imini kuye, abantu abaninzi kakhulu waya kuye negumbi lakhe guest. Waza wathetha, eyalingqinelayo ubukumkani bukaThixo, nabantu, ebeyisela kwizinto nabo ngoYesu, ngokusebenzisa umthetho kaMoses nakubaProfeti, ukususela kusasa kwada kwahlwa.
28:24 Kwaye abanye babekholelwa izinto yena wathi, kodwa abanye abazange bakholwe.
28:25 Bakuba ke kungekho kuvumelana phakathi kwabo, basuka, ngoxa uPawulos ethetha eli gama linye: "Phi na kum uMoya oyiNgcwele ukuthetha kakuhle kangakanani koobawo bethu ngomprofeti uIsaya,
28:26 bathi: 'Hamba uye kwaba bantu, uthi kubo: ukuva, uya kuva bangaqondi, nokubona, Uya kubona kwaye akabonwa.
28:27 Kuba intliziyo yaba bantu ithe fithi kukutyeba, baza bamphulaphula ngeendlebe madolo, Bayawacima namehlo abo ambathe, hleze babone ngamehlo, uweve ngeendlebe, Baqonde ngentliziyo, kwaye ke ukuguqulwa, ndize ndibaphilise. '
28:28 ngoko ke, makwazeke oko kuni, ukuba usindiso lukaThixo luthunyelwe kuzo iintlanga, kwaye baya kuluva. "
28:29 Waza akuba ezitshilo ezi zinto, bamaYuda bemka kuye, nangona kusamele imibuzo emininzi phakathi kwabo.
28:30 Ngoko wahlala kangangeminyaka emibini iphela indawo yakhe ayiqeshileyo. Waza wamkela bonke baya kuye,
28:31 eshumayela kubo ubukumkani bukaThixo yaye efundisa izinto kowethu eNkosini uYesu Kristu, konke ukuthembeka, ngaphandle mazinyatheliswe.